1Sainte Bokin 'i Makabeo – 2trondro
Home / Baiboly / Testamenta Taloha / 1Sainte Bokin 'i Makabeo
1 Makabeo 1
1:1 Ary nony afaka izany, Alexander, ny zanak'i Filipo ny Masedoniana, izay nanjaka tany Gresy voalohany rehefa tonga avy any amin'ny tany Kitima, namely Dariosa, mpanjakan'ny Persia sy Media.
1:2 Nanendry ady maro, Ary noraisiny ny fiarovana mafy rehetra, Ary novonoina ho faty ny mpanjakan'ny tany.
1:3 Dia nandeha namaky hatramin'ny faran'ny tany. Ary izy nandray ny babo firenena maro. Ary ny tany dia nangina eo imasony.
1:4 Ary novoriny ny hery, ary ny tafika mahery indrindra. Ary Izy avo, Ary ny fony nihanatoky.
1:5 Ary nisambotra ny faritra ny firenena sy ny fiandrianany mpitarika, ka dia nampanaovina fanompoana azy.
1:6 Ary rehefa afaka izany,, dia niankohoka teo am-pandrianany, ary fantany fa ho faty izy.
1:7 Koa niantso ny mpanompony, manan-kaja izay niara-natsangana tamin'i azy avy ny tanora. Dia nozarazarainy ny fanjakany ho azy ireo, fony Izy mbola velona.
1:8 Ary nanjaka roa ambin'ny folo taona i Aleksandra, ary avy eo dia maty izy.
1:9 Ary ny mpanompony nahazo ny fanjakany, samy nandimby azy.
1:10 Ary izy rehetra diadema eo nametraka ny tenany araka ny fahafatesany, ary ny zanany mandimby azy, nandritra ny taona maro; ary nampitomboiny be ny loza eto an-tany.
1:11 Ary nisy nivoaka avy teo aminy ny mpanota faka, Antiokosa Epifana, ny zanak'i Antiokosa mpanjaka, izay natao antoka tany Roma. Ary tonga mpanjaka tamin'ny telo-polo amby zato-taona fahafito ny fanjakan 'ny Grika.
1:12 Ary tamin'izany andro izany, dia nivoaka avy tany Isiraely zanaky ny heloka, ary izy nitaona olona maro, nanao hoe:: "Aoka isika handeha hifampiraharaha fanekena amin'ny jentilisa izay manodidina antsika. Fa satria efa nihataka taminy, dratsy maro dia nahita anay. "
1:13 Ary ny teny toa tsara eo imasony.
1:14 Ary ny sasany tamin'ny olona tapa-kevitra ny hanao izany, ary izy ireo nankany amin'ny mpanjaka. Ka dia nomeny azy ireo ny fahefana hanao zavatra araka ny rariny ny jentilisa.
1:15 Dia nanorina ny kianja fanatanjahan-tena tao Jerosalema, araka ny lalàn 'ny Firenena.
1:16 Ary izy ireo nanao ny tenany tsy voafora, ary dia niala avy any ny fanekena masina, ary izy ireo olona nanampy ho an'ny firenena, ka dia namidiny ho amin'ny fanaovan-dratsy.
1:17 Ary ny fanjakana dia vonona eo imason'i Antiokosa, ary nanomboka nanjaka ny tany Egypta, ka mba hanjaka fanjakana roa.
1:18 Ary dia niditra tany Ejipta miaraka amin'ny nampahory vahoaka, amin'ny haingam-pandeha ny kalesy, ary elefanta, sy mpitaingin-tsoavaly, ary be dia be ny sambo.
1:19 Ary notendreny ny ady tamin'i Ptolémée, ny mpanjakan'i Egypta, ary Ptolémée feno tahotra eo anatrehany, ary dia nandositra, ary maro niampatrampatra naratra.
1:20 Ary noraisiko ny tanàna mimanda tany amin'ny tany Egypta, ary dia nandray ny babo avy tany amin'ny tany Egypta.
1:21 Ary Antiokosa niverina, taorian'ny namely Ejipta, eo amin'ny efa-polo amby zato taona-fahatelo, ary dia niakatra tamin'ny Isiraely.
1:22 Dia niakatra tany Jerosalema, miaraka amin'ny nampahory vahoaka.
1:23 Ary niditra tao amin'ny fitoerana masina amin'ny fieboeboana, fa izy kosa nitondra ny alitara volamena, ary ny fanaovan-jiro ny mazava, ary ny fanaka rehetra, ary ny latabatra ny mofo aseho, ary ny fanaky ny fanatitra aidina momba azy, ary ny lovia, ary ny tafondro kely volamena, ary ny efitra lamba, Ary ny satro-boninahitra, ary ny volamena haingo, izay momba ny tavan'ny tempoly. Ary nanorotoro azy rehetra.
1:24 Ary naka ny volafotsy sy ny volamena, ary ny fanaka sarobidy, fa izy kosa nitondra ny harena nafenina, izay hita. Ary rehefa naka ireo zavatra rehetra ireo lasa, dia lasa nody any amin'ny taniny.
1:25 Ary nitondra ny famonoana olona, ary niresaka be fiavonavonana.
1:26 Ary nisy fidradradradrana lehibe amin'ny Isiraely sy ny rehetra tamin'ny fitoerany.
1:27 Ary ny mpitondra sy ny loholona nisaona, ary ny virijina sy ny zatovolahy dia tonga malemy, ary voninahitry ny ny vehivavy niova.
1:28 Mpampakatra rehetra naka hira fahalahelovana, ary niara-nipetraka tao amin'ny fampakaram fandriana nisaona.
1:29 Dia nihorohoro ny tany ho an'ny ny mponina eo aminy, ary ny taranak'i Jakoba rehetra nitafy henatra.
1:30 Ary rehefa afaka roa taona ny andro, ny mpanjaka dia naniraka ny mpanapaka ny fanomezam-boninahitra ho any an-tanànan'ny Joda, ary tonga tany Jerosalema izy mbamin'ny olona betsaka.
1:31 Ary izy niteny am-pilaminana teny mora aminy, in fitaky; ary dia nino Azy.
1:32 Dia nihazakazaka tampoka ny tanàna, ary dia nasiany tamin'ny kapoka lehibe, Ary nandringana maro tamin 'ny vahoaka Israely.
1:33 Dia naka ny babo tao an-tanàna, Ary nandoro azy tamin'ny afo, Ary nandrava ny trano ary ny rindrina manodidina azy.
1:34 Ary nitondra babo ny vehivavy toy ny babo, dia nahafaka ny ankizy sy ny biby fiompy.
1:35 Dia nanorina ny tanànan'i Davida tamin'ny lehibe sy mahery manda, ary amin'ny tilikambo mafy, ka dia tonga fiarovana mafy ho azy ireo.
1:36 Ary napetany teo amin'izany toerana ho mpanota ny olona, ratsy fanahy, ary niara-naniry mafy izy ireo ao. Ary nangoninao fitaovam-piadiana sy vatsy. Dia nivory ny babo Jerosalema,
1:37 ary nametraka azy ireo tao amin'io toerana io. Ka tonga fandrika lehibe.
1:38 Ary dia tonga izany toerana ny otrika hamely ny fitoerana masina sy ny devoly ratsy teo amin'ny Isiraely.
1:39 Ary tao no nanidinany tsy manan-tsiny rà manodidina ny fitoerana masina, ary voaloto ny fitoerana masina.
1:40 Ary ny mponina tany Jerosalema, dia nandositra noho ny azy ireo, ary ny tanàna dia tonga ny fonenan'ny ivelany, ka dia tonga vahiny ho azy ny zanany, ary ny zanany naterany nilaozan'ny azy.
1:41 Ny fitoerana masina tonga foana, toy ny toeram-manirery, ny andro firavoravoana niova ho andro fisaonana, ny sabatany ho fahafaham-baraka, ny voninahitra ho na inona na inona.
1:42 Ny henatra nihamaro araka ny voninahiny, ary ny manerinerina niova ho fitomaniana.
1:43 Ary Antiokosa mpanjaka nanoratra ho amin'ny fanjakany rehetra, fa ny olona rehetra dia tsy maintsy ho iray, ary samy tokony hamoy ny lalàna.
1:44 Ary ny firenena rehetra nanaiky, araka ny tenin'ny mpanjaka Antiokosa.
1:45 Ary maro tamin'ny Isiraely Nanaiky hanaraka ny fanandevozana, ka nanao sorona tamin'ny sampy, ka nandoto ny Sabata.
1:46 Ary ny mpanjaka naniraka taratasy, ny tanan'ny iraka, ho any Jerosalema sy ny tanàna rehetra any Joda: mba hanaraka ny lalàn'ny firenen 'ny tany,
1:47 ary mba mandrara dorana sy ny fanatitra ary ny fanavotana ho atao any amin'ny tempoly 'Andriamanitra,
1:48 ary toy izany no mandrara ny fankalazana ny Sabata sy ny fotoam-pivavahanareo.
1:49 Ary izy nandidy ny toerana masina mba ho voaloto, miaraka amin'ny olona masina Isiraely.
1:50 Ary nanome baiko izy mba haorina alitara, ary ny tempoly, ary ny sampy, Ary nandidy ny fandoroana velona ny nofo ny kisoa sy ny maloto biby fiompy,
1:51 ary mba hamela ny zanany lahy tsy voafora, ary mandoto ny fanahiny amin'ny rehetra izay maloto, Ary tamin'ny zava-betaveta, ka dia izy ireo hanadino ny lalàna sy ny mety hanova ny didy rehetra Andriamanitra,
1:52 ary na iza na iza tsy hanao zavatra araka ny tenin'ny mpanjaka Antiokosa, dia hatao maty.
1:53 Araka izany teny rehetra izany, dia nanoratra ho amin'ny fanjakany rehetra. Ary nanendry mpitarika ny olona, izay no manery azy ireo hanao ireo zavatra ireo.
1:54 Ary izao nandidy ny tanànan'ny Joda hanao sorona.
1:55 Ary maro amin'ny olona, izay nandao ny lalàn'i Jehovah, niangona ny azy ireo. Ary nanao ratsy teo amin'ny tany.
1:56 Ary nandroaka ny olona Isiraely niafina sy ho any amin'ny mangingina ny mpandositra.
1:57 Ary tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo amin'ny volana Kislev, eo amin'ny efa-polo amby zato-taona fahadimy, Antiokosa mpanjaka, nanangana ny fahavetavetana sampy ny lao eo ambonin'ny alitara 'Andriamanitra, ary nanao alitara eran 'ny manodidina rehetra tanànan'ny Joda.
1:58 Ary nandoro ditin-kazo manitra izy ireo, dia namono zavatra hatao fanatitra eo am-baravarana ny trano sy eny an-dalambe.
1:59 Dia nanapaka ny boky ao amin'ny lalàn 'Andriamanitra sy nandringana azy tamin'ny afo.
1:60 Ary ireo rehetra izay hita amin'ny boky ao amin'ny Testamenta 'ny Tompo, ary na iza na iza nahita ny lalàn'i Jehovah, izy ireo butchered, araka ny didy avy amin'ny mpanjaka.
1:61 Araka ny heriny, dia nanao izany tamin'ny olona Isiraely, raha mbola hita tao an-tanàna, andro isam-bolana.
1:62 Ary amin'ny andro fahadimy amby roa-polo tamin'ny volana, dia namono zavatra hatao fanatitra teo amin'izany alitara izay tandrifin'ny alitara avo.
1:63 Ary ny vehivavy izay voafora ny zanany dia butchered, araka izay nifehezan'ny mpanjaka Antiokosa.
1:64 Ary nampiato ny ankizy araka ny hatony rehetra ny tranony, ary ireo izay efa voafora azy, izy ireo butchered.
1:65 Ary maro ny olona Isiraely nanapa-kevitra ao anatin'ny tena ho tsy hihinana zava-maloto. Dia nifidy ny ho faty, fa tsy ho voaloto amin'ny sakafo maloto.
1:66 Ary tsy vonona ny hitsabaka eo amin'ny lalàn'Andriamanitra masina, ary izy ireo butchered.
1:67 Ary be dia fahatezerana mafy amin 'ny olona.
1 Makabeo 2
2:1 Ary tamin'izany andro izany, , dia nitsangana ka Mattathias, ny zanak'i John, zanak'i Simeona, ny mpisorona taranak'i Joarib avy tany Jerosalema, ary nonina an-tendrombohitra ny Modìna.
2:2 Ary nanana zanakalahy dimy: John, izay atao hoe koa dia Gady,
2:3 ary Simon, izay atao hoe koa Tasì,
2:4 ary Jodasy, izay atao hoe Makabeo,
2:5 ary Eleazara, izay atao hoe koa Avaran, ary Jonathan, izay atao hoe koa Apphus.
2:6 Ireo nahita ny ratsy izay natao teo amin'ny taranak'i Joda sy tany Jerosalema.
2:7 Ary hoy Matatiasa: "Idiran-doza aho, fa nahoana no teraka hahita ny alahelo 'ny vahoakako sy ny alahelo ny tanàna masina, ary ny mipetraka any, raha efa voatolotra eo an-tànan'ny fahavalo?
2:8 Ny toerana masina lavo eo an-tànan'ny ivelany. Ny tempoly dia tahaka ny olona tsy misy voninahitra.
2:9 Ary ny fanaka voninahiny efa nentina ho babo. Ny olona antitra no butchered an-dalambe, sy ny zanany lahy no lavon'ny sabatry ny fahavalony.
2:10 Firenena iza moa no tsy nandova ny fanjakany sy nalaina tao ny babo?
2:11 Ny hatsaran-tarehiny rehetra efa nesorina. Izy izay maimaim-poana, Lasa mpanompo.
2:12 Ary indro, ny fitoerana masina, ary ny hatsaran-tarehiny, ary ny voninahitra efa lao, ary ny jentilisa no nandoto azy.
2:13 Noho izany, inona moa izany ho antsika fa mbola velona?"
2:14 Ary Matatiasa sy ny zanany nandriatra ny fitafiany, dia nisy nanarona ny tenany amin'ny lamba fisaonana, ary izy ireo nitaraina indrindra.
2:15 Ary ireo izay efa naniraka avy mpanjaka Antiokosa tonga teo amin'io toerana io, mba hanery ireo izay nandositra tao an-tanàna ny Modìna mba immolate, ary ny handoro ditin-kazo manitra, ary tsy ho ao amin'ny lalàn'Andriamanitra.
2:16 Ary maro ny olona Isiraely nanaiky ka tonga tany aminy. Fa Matatiasa sy ny zanany nivadika.
2:17 Ary ireo izay efa nirahina avy tany Antiokosa, mamaly, hoy izy tamin'i Matatiasa: "Hianao no mpanapaka, ary tena kanto sady be amin'ity tanàna ity, ary ianao dia voaravaka zanany sy ny rahalahiny.
2:18 Noho izany, manatona aloha, ary carryout ny lamin 'ny mpanjaka, toy ny firenena rehetra nanao, ary ny lehilahy amin'ny Joda, ary ireo izay nijanona tao Jerosalema. Ary ianao sy ny zanakao dia ho eo amin'ny mpinamana ny mpanjaka, dia nampanan-karena amin'ny volamena sy ny volafotsy sy ny fanomezana maro. "
2:19 Ary Matatiasa namaly, ka hoy izy tamin'ny feo mahery: "Na dia firenena rehetra mankatò mpanjaka Antiokosa, ka dia samy lasa avy ny fanompoana momba ny lalàna ny amin'ny ray sy Nanaiky ny didiny,
2:20 Izaho sy ny zanako-lahy sy ny rahalahiko dia hankatò ny lalàna avy tamin'ny razana.
2:21 Enga anie Andriamanitra mamela heloka ho antsika. Tsy mahasoa ho antsika ny handao ny lalàna sy ny mpitsara 'Andriamanitra.
2:22 Dia tsy mihaino ny tenin'ny mpanjaka Antiokosa, ary tsy ho isika sorona, mandika ny didin 'ny lalàna, mba niainga tamin'ny lalan-kafa. "
2:23 Ary, raha nitsahatra niteny ireo teny ireo, Jiosy anankiray nanatona teo imason'ny olona rehetra teo hanao sorona ho amin'ny sampin'ny teo ambonin'ny alitara tao an-tanànan'i Modìna, araka ny lamin 'ny mpanjaka.
2:24 Ary Matatiasa nahita, Ary sosotra, ary ny toetra nangovitra, ary ny fahatezerana dia enkindled araka ny fitsarana ny lalàna, ny niantsambotsambotra ny, dia namono azy teo amin'ny alitara.
2:25 Koa, Ny amin'izay lehilahy tian'ny mpanjaka efa naniraka Antiokosa, izay nanery azy mba immolate, dia novonoiny tamin'izany andro izany, Ary nandrava ny alitara,
2:26 ary izy dia fatra-pitana ny lalàna, toy ny nataon'i Finea izay an'i Zimry, ny zanak'i Salomi.
2:27 Ary Matatiasa hoy tamin'ny feo mahery tao an-tanàna, nanao hoe:, "Rehetra izay mihazona zotom-po ho an'ny ny lalàna, fitazonana ny fanekena, aoka izy hanaraka Ahy. "
2:28 Ary izy sy ny zanany, dia nandositra ho any an-tendrombohitra, ary izy mirahalahy nandao aoriany nananany na inona na inona tao an-tanàna.
2:29 Ary maro izay nikatsaka fitsarana sy ny lalàna ka nidina an-efitra.
2:30 Dia nitoby teo, mbamin'ny zanany, ary ny vadiny, sy ny ombiny, noho ny ratsy efa manafotra azy ireo.
2:31 Ary nisy nilaza tamin'ny mpanjaka ny lehilahy, sy ny miaramila izay tao Jerosalema, tao an-Tanànan'i Davida, fa ny olona sasany, izay nandatsaka manokana ny didin'ny mpanjaka, efa lasa ho any amin'ny toerana miafina any an-efitra, ary maro no efa nanaraka azy.
2:32 Ary niaraka tamin'izay dia, dia lasa nankany amin'izy ireo, ka nandamina ny ady hamely azy, tamin'ny andro Sabata.
2:33 Dia hoy izy taminy: "Ary izao, no mbola manohitra? Mandehana ka hanao zavatra araka ny tenin'ny mpanjaka Antiokosa, dia ho velona ianareo. "
2:34 Ary hoy izy ireo:, "Tsy mivoaka, ary tsy hanao ny tenin'ny mpanjaka, mba handoto ny andro Sabata. "
2:35 Dia nirohotra hamely azy amin'ny ady.
2:36 Nefa tsy namaly, sady tsy dia hitora-bato azy ireo, na izy ireo barricade ny toerana miafina,
2:37 fa hoy ireo:, "Aoka isika ho faty avokoa amin'ny fahatsoram-po. Sy ny lanitra sy ny tany ho mijoro ho vavolombelona ho antsika, izay nandringana anay tsy an-drariny. "
2:38 Dia nentiny nivoaka ny ady amin'ny andro Sabata. Ary izy ireo novonoina ho faty, ny vadiny, ary ny zanany, sy ny biby fiompiny, na dia ny isan'ny arivo fanahin 'ny olona.
2:39 Ary Matatiasa sy ny namany nandre izany, ary dia nanao hira fahalahelovana lehibe indrindra ho azy ireo.
2:40 Ary samy nilaza tamin'ny namany, "Raha manao fotsiny isika rehetra ho toy ny rahalahy efa nanao, ary raha toa ka tsy miady ny amin'ny jentilisa noho ny fiainantsika sy ny fanamarinana, dia ho vetivety hanafoana antsika eto an-tany. "
2:41 Dia nanapa-kevitra, tamin'izany andro izany, nanao hoe:: "Aoka ny olona rehetra, izay ho avy hamely anay amin'ny ady amin'ny andro Sabata, dia hiady aminy. Ary isika dia tsy ny rehetra ho faty, tahaka ny rahalahiny, izay efa novonoina ho faty ao amin'ny toerana miafina. "
2:42 Ary nisy nivory teo anoloany ny synagoga ny Hasideans, lehilahy mahery amin'ny Isiraely, tsirairay amin'ny sitrapony ho ny lalàna.
2:43 Ary ireo izay rehetra nandositra avy nanampy ny ratsy ny tenany ho azy ireo, ka tonga habakabaka ho azy ireo.
2:44 Dia nivory ny tafika, ka dia namely ny mpanota eo amin'ny fahatezerana sy ny ratsy fanahy eo amin'ny fahatezerany. Ary ny hafa firenena nandositra ho any amin'ny, mba ho afa-mandositra.
2:45 Ary Matatiasa sy ny namany nandeha manodidina, ka nandringana ny alitara.
2:46 Ary voafora ny tsy voafora rehetra zazalahy, izay hitany ao anatin'ny fetran'ny Isiraely, ary izy ireo nanao zavatra tamin'ny herimpo.
2:47 Ary nanenjika ny zanaky ny fieboeboana, ary ny asa dia nanan-karena an-tanany.
2:48 Dia nahazo ny lalàna avy amin'ny tànan'ny jentilisa, ary avy any amin'ny tanan'ny mpanjaka. Ary izy ireo tsy mba hitolo-batana ny tandroka ho an'ny mpanota.
2:49 Ary ny andro dia nanatona rehefa ho faty Mattathias, Ary hoy izy tamin'ny zanany: "Ary fizahozahoana sy ny famaizana no nampahery, ary izany dia andro manjera sy ny fahatezerana mirehitra.
2:50 Koa ankehitriny, ny feo, ho hanahaka ny lalàna, ary hanolotra ny ainy noho ny fanekena tamin'ny razanao,.
2:51 Ary tsarovy ny asan'ny ray, izay nataony hatramin'ny taranaka fara mandimby. Dia hahazo ianareo lehibe voninahitra sy anarana mandrakizay.
2:52 Tsy i Abrahama hita ho mahatoky amin'ny fakam-panahy, Ary dia toy izany nisaina ho azy toy ny rariny?
2:53 Joseph, amin'ny fotoana hamaliana ny fahoriany, nitandrina ny didy, ka tonga mpanapaka ny tany Egypta.
2:54 Finehasa raintsika, ho be zotom-po ao amin'ny zotom-po 'Andriamanitra, nahazo ny faneken'ny fisoronana mandrakizay.
2:55 Jesosy, satria izy nahatanteraka ny teny, natao ho mpitarika teo amin'ny Isiraely.
2:56 Caleb, satria dia nijoro ho vavolombelona teo amin'ny fiangonana, nahazo lova.
2:57 David, ny famindram-pony, nahazo ny seza fiandrianan'ny fanjakana ho an'ny taranaka fara mandimby.
2:58 Elia, satria izy be zotom-po amin'ny zotom-po ho an'ny ny lalàna, nampiakarina any an-danitra.
2:59 Hanania sy Misaela ary Azaria, raha mino, dia nafahana tamin 'ny lelafo.
2:60 Daniel, ny tsotra, natolotra avy amin'ny vavan'ny liona.
2:61 Ary noho izany, hevero fa, amin'ny alalan'ny taranaka fara mandimby ny rehetra izay natoky Azy, Tsy misy efa tsy amin'ny hery.
2:62 Ary aza matahotra ny tenin 'ny olo-meloka, ny voninahiny dia tain-drorohany sy ny kankana.
2:63 Amin'izao fotoana izao izy Nidera, ary rahampitso izy tsy ho hita, satria efa niverina an-tany sy ny fomba fisainany no maty.
2:64 Noho izany, ianareo lahy, ho hery ary hanao zavatra amim-pahasahiana tao amin'ny lalàna. Fa izany, dia ho be voninahitra.
2:65 Ary indro, Fantatro fa ny Simona rahalahiny dia lehilahy torohevitra. Hihaino azy foana, ary dia ho tonga rain'ny ho anao.
2:66 Ary Jodasy Makabeo, izay efa matanjaka sy vahaolana hatramin'ny fahazazany, aoka ho ny mpitarika ny milisy, ary Izy no mitantana ny ady ny olona.
2:67 Ary dia hanampy ho anareo izay rehetra mitandrina ny lalàna, ka dia ho milaza ny fanamarinana ny olona.
2:68 Mamalia amin'ny jentilisa ny famaizana, ary mihaino ny didy ny amin'ny lalàna. "
2:69 Dia nitso-drano azy ireo, ary dia nanampy ho any amin'ny razany.
2:70 Ary nodimandry any amin'ny efa-polo amby zato taona fahenina-, ary nalevina tamin'ny zanany tao amin'ny sepulchers-drazany, in Modìna, ary ny Isiraely rehetra nisaona azy tamin'ny fisaonana lehibe.
1 Makabeo 3
3:1 Sy ny Zanany Jodasy, izay atao hoe Makabeo, nitsangana teo amin'ny fitoerany.
3:2 Ary ny rahalahiny rehetra nanampy azy, miaraka amin'ny 'ireo rehetra izay efa niray tamin'i rainy. Ary niady ny ady amin'ny Isiraely izay nanaraka fifaliana.
3:3 Ary nitarina ny voninahitry ny vahoakany, ary niakanjo ny tenany amin'ny saron-tratra tahaka ny lehilahy mahery, ary nanodidina ny tenany ny fitaovam-piadiana amin'ny ady, Ary niaro ny toby ny sabany.
3:4 Ao ny zavatra nataony, dia tonga toy ny liona, sy tahaka ny liona tanora mierona amin'ny fihazana.
3:5 Ary nanenjika ny ratsy fanahy sy fanarahan'ny azy ireo. Ary ireo izay sahiran-tsaina ny vahoakany, dia nodorany tamin'ny afo.
3:6 Ary ny fahavalony dia hampandositra ny fahatahorana azy, ary ny mpanao ratsy dia raiki-tahotra. Ary ny famonjena dia tsara toromarika an-tànany.
3:7 Ary nampahatezitra mpanjaka maro, ka nanome hafaliana tamin'i Jakoba noho ny asany, ary ny fahatsiarovana dia ho fitahiana ho an'ny taranaka fara mandimby.
3:8 Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna Joda, Ary nandringana ny ratsy fanahy avy amin'ireo, ary dia nitodika fahatezerako tamin'ny Isiraely.
3:9 Ary izy nalaza, na dia ny sisiny ny tany, ary namory ireo izay very.
3:10 Ary toy izany koa Apolloniosa namory ny Jentilisa, amin'ny maro sy miaramila maro avy any Samaria, mba hiady tamin'ny Israely.
3:11 Ary Jodasy nahalala izany, ary dia nivoaka hitsena azy. Ary namely azy izy ka namono azy. Ary maro no niampatrampatra naratra, ary ny sisa nandositra.
3:12 Dia nesoriny ny babo. Ary Jodasy nandray ny fizakana ny sabatr'i Apolloniosa, Ary izy niady tamin'i azy nandritra ny androny rehetra.
3:13 ary Seron, ny mpitarika ny miaramilan'i Syria, Jodasy efa reny fa namory ny fiangonana, dia ny mpanompo mahatoky sy fivoriambe niaraka taminy.
3:14 Ary hoy izy:, "Hataoko ho anarana ho ahy, ary hankalazaina ao amin'ny fanjakana, ary dia handresy i Jodasy in ady, sy ny momba azy, izay efa nanamavo ny tenin'ny mpanjaka. "
3:15 Dia nanao fanasana ny tenany. Ary ny tobin'ny ny ratsy fanahy niara-niakatra taminy, amin'ny mahery vondrona fanampiny, ka hanao amin'ny famaliana teo amin'ny Zanak'Isiraely.
3:16 Ary izy ireo nanatona dia hatrany Beti-horona. Ary Jodasy nivoaka hitsena azy, amin'ny olom-bitsy.
3:17 Fa raha nahita ny tafika tamy hamely azy, dia hoy izy tamin'i Jodasy, "Ahoana no vitsy ho afaka hiady dia lehibe ary mahery ny vahoaka, na dia malemy aza isika amin'ny alalan'ny fifadian-kanina ankehitriny?"
3:18 Ary hoy Jodasa:: "Mora ho an'ny maro ho fonosina ao anatin'ny amin'ny tanan'ny vitsy, Fa tsy misy hafa, eo imason 'ny Andriamanitry ny lanitra mba hanafaka amin'ny alalan'ny maro, na amin'ny alalan'ny vitsy.
3:19 Fa ny fandresena amin'ny ady tsy ao amin'ny maro ny tafika, fa amin'ny hery avy any an-danitra.
3:20 Izy ireo tonga amintsika amin'ny contemptuous vahoaka sy ny fireharehana, mba handringanana antsika, amin 'ny vadiny sy ny zanany, ary ny handroba antsika.
3:21 Raha ny marina, dia hiady amin'ny anaran'ny amin 'ny fanahintsika sy ny lalàna.
3:22 Ary ny Tompo mihitsy no hanorotoro azy eo anatrehan'Andriamanitsika face. Fa ny aminareo, aza matahotra azy. "
3:23 Ary raha vao nitsahatra niteny, dia namely azy tampoka. Dia resy Serona sady nahita ny tafiny Torotoroiko eo imasony.
3:24 Dia nanenjika azy tamin'ny fidinana Beti-horona, hatrany amin 'ny tani-hay. Sy valon-jato ny lahy voakapa, fa ny sisa nandositra any amin'ny tanin'ny Filistina.
3:25 Ary ny tahotra sy horohoro Jodasy, ary koa ny rahalahiny, dia nilatsaka tamin'izay rehetra manodidina azy ireo ny firenena.
3:26 Ary ny anarany tonga hatrany amin'ny mpanjaka, dia ny jentilisa rehetra nilaza tantara ny adin'i Jodasa.
3:27 Fa nony nandre izany Antiokosa mpanjaka tantara, dia tezitra ny ny ainy. Dia naniraka olona ka nampivory miaramila avy amin'ny fanjakany manontolo, tena matanjaka tafika.
3:28 Ary nanokatra ny fandatsahan-drakitra, ary nomeny avy stipends amin'ny tafika nandritra ny herintaona. Dia nandidy azy mba hamboatra ho ny zavatra rehetra.
3:29 Ary hitany fa ny vola avy amin'ny firaketany tsy nahomby, ary ny hetra ny firenena dia kely, noho ny fifandirana sy ny kapoka izay efa nahatonga eto an-tany, mba hanaisotra ny ara-dalàna lalàna, izay efa hatramin'ny andro voalohany.
3:30 Ary natahotra, fandrao tsy ampy fanindroany ho toy ny voalohany, ny lany sy ny fanomezam-pahasoavana, izay efa nomeny rahateo fa niaraka liberaly tanana. Fa ny tafahoatra no be lavitra noho ny mpanjaka izay efa teo anatrehany.
3:31 Ary dia taitra ho any ny ainy, dia nikasa ny handeha ho any Persia, ary haka hetra avy amin'ny faritra, ary ny hanangona vola be.
3:32 Dia namela Lisiasa, ny tandapa ny fianakavian'ny mpanjaka, mba hiahy ny fanjakana hatramin'ny ony Eofrata, hatrany amin'ny onin'i Egypta,
3:33 ary hitaiza ny zanany, Antiokosa, mandra-hiverina.
3:34 Dia natolotra azy ny antsasaky ny tafika, ary ny elefanta. Dia nandidy azy ny rehetra fa te, ary ny amin'ny mponina tany Jodia sy Jerosalema:
3:35 ka mba hampanalainy tafika hamely azy Izy, handringanana sy ny hamongotra ny hatsaran-toetra ny Isiraely sy ny sisa any Jerosalema, ary hanaisotra ny fahatsiarovana azy izany toerana,
3:36 ary toy izany koa fa hanorina fonenana ho an'ny zanaky ny hafa firenena rehetra ny faritra, ary no hizarana ny taniny amin'ny filokana.
3:37 Ary noho izany, ny mpanjaka naka azy sisa anjara ny tafika, ka dia lasa nivoaka avy tany Antiokia, ny tanàna ny fanjakany, eo amin'ny efa-polo amby zato taona fahafito-. Ary nita ny ony Eofrata, Ary nandeha nitety ny faritra ambony.
3:38 Dia nifidy an'i Ptolémée Lysia, ny zanak'i Dorymenes, sy Nikanora ary Gorjiasa, lehilahy mahery avy teo amin'ny sakaizan'ny mpanjaka.
3:39 Ary Izy naniraka ireo amin'ny olona efatra alina, ary ny mpitaingin-tsoavaly fito arivo, ho tafiditra ao amin'ny tanin'ny Joda, ary handrava azy, araka ny tenin 'ny mpanjaka.
3:40 Ary noho izany, hoy izy ireo ny hery rehetra, dia tonga ka naka toerana akaikin'i Emaosy, any amin'ny tany amin'ny tani-hay.
3:41 Ary ny mpandranto amin'ny faritra nandre ny anarany. Ary izy ireo naka volafotsy be dia be, ary ny volamena, ary ny mpanompony, dia nankany an-toby mba hitondra ny Zanak'Isiraely hiditra ao fanandevozana. Ary ny tafika avy any Syria sy ny tany ny hafa firenena no nanampy azy ireo.
3:42 Ary Jodasa sy ny rahalahiny hitany fa ratsy ireo rehefa nihamaro, ary ny tafika efa napetraka akaikin'ny fari-taniny. Ary fantany ny tenin'ny mpanjaka, izay nandidy ny vahoaka mba hovonoina ho faty, ary mba ho levona.
3:43 Ary hoy izy ireo:, samy amin'ny namany, "Aoka isika hanampy ny fahakiviana ny olona, ary aoka isika hiady ho an'ny ny olontsika sy ny toerana masina. "
3:44 Ary nisy fiangonana nivory, ka izy ireo ho vonona ho amin'ny ady, ary, mba hivavaka sy hangataka famindram-po sy ny fangoraham-po.
3:45 Ary Jerosalema dia tsy honenana, fa dia tahaka ny tani-hay. Tsy nisy izay niditra na nivoaka avy amin'ny zanany. Ary ny fitoerana masina voahosihosy teo dia, ary ny zanaky ny hafa firenena dia tao amin'ny batery fiarovana. Ity toerana ity dia ny fonenan'ny jentilisa. Ary naharavoravo hesorina Jacob, ary ny mozika ny sobaba sy ny lokanga nitsahatra amin'izany toerana.
3:46 Dia nivory ka tonga tany Mizpa, tandrifin'i Jerosalema. Fa ny fitoerana fivavahana tany Mizpa, ao amin'ny Isiraely teo aloha.
3:47 Ary nifady hanina tamin'izany andro izany, ka dia nampiakanjoina ny tenany amin'ny lamba fisaonana, ary nametraka lavenona ny lohany, dia nandriatra ny fitafiany.
3:48 Ary ny olona naninjitra nisokatra ny boky ao amin'ny lalàna, izay jentilisa nitady ny endriky ny sampiny.
3:49 Ary izy ireo nitondra ny mpisorona firavaka, ary ny voaloham-bokatra ary ny fahafolon-karena, ary Nanaitra ny Nazirita, izay efa vita ny andro.
3:50 Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery ny lanitra, nanao hoe:: "Inona no hataonay amin'ireto olona ireto, ary aiza no hangalanao azy?
3:51 Fa ny zavatra masina voahosihosy sy efa voaloto, ary ny mpisorona ho amin'ny alahelo sy ny fahafaham-baraka.
3:52 Ary indro, ny Firenena miara-mioko hamely anay, handringanana antsika. Fantatrareo izay nikasa hamely anay.
3:53 Ahoana no ho afaka hijoro eo anoloany, raha tsy, Andriamanitra ô, hanampy antsika?"
3:54 Dia nitsoka ny trompetra tamin'ny antso mafy.
3:55 Ary rehefa afaka izany, Jodasy nanendry mpifehy ny vahoaka: over arivo, ary ny an-jatony, sy ny dimam-polo avy, sy ny am-polony.
3:56 Ary hoy izy ireo izay manao trano, na izay efa voafofo vadiny, namboly tanim-boaloboka izay, na izay natahotra mafy, fa tokony hiverina, samy ho any an-tranony, araka ny lalàna.
3:57 Dia nifindra ny toby, ary nafindra any atsimo Emaosy.
3:58 Ary hoy Jodasa:: "Eny, misikìna ihany, ary ho zanaky ny fahefana, ary aoka ho vonona maraina, mba hiady ireo firenena izay efa tafavory hamely anay, ka handrava antsika sy ny zava-masina.
3:59 Fa tsara kokoa ho antsika ny maty mitam-piadiana, toy izay mahita faharatsiana tonga ny firenentsika sy ho any amin'ny toerana masina.
3:60 Na dia izany aza, araka izay sitrak'Andriamanitra ho any an-danitra, dia aoka ho. "
1 Makabeo 4
4:1 Ary Gorjiasa naka dimy arivo lahy, ary ny mpitaingin-tsoavaly voafantina arivo, ary nifindra avy tany an-toby ny alina,
4:2 ka mba hatao eo amin'ny tobin'ny Jody sy hamely azy tampoka. Ary ny zanakalahin'i izay avy amin'ny batery fiarovana dia ny mpitarika.
4:3 Ary Jodasy nandre izany, dia nitsangana, ny lehilahy mahery, mba hamely ny hery avy amin'ny tafiky ny mpanjaka izay tao Emaosy.
4:4 Fa ny miaramila mbola niparitaka niala tamin'ny nitobiany.
4:5 Ary Gorjiasa tonga alina, an-tobin'ny Jodasa, ary tsy nahita olona, ka nitady azy ireo tao an-tendrombohitra. Fa hoy izy:, "Ireo lehilahy nandositra antsika."
4:6 Ary nony maraina ny andro efa lasa, Jodasy niseho teo amin'ny tany lemaka ihany telo arivo lahy, izay nanana fiadiana na sabatra tsy.
4:7 Ary nahita ny herin'ny ny tobin'ny jentilisa, ary ny lehilahy manao akanjo fiarovana, ary ny mpitaingin-tsoavaly manodidina azy ireo, ary fa ireo no nampiofanina mba hiady.
4:8 Ary Jodasy hoy izy tamin'ny olona izay nomba azy: "Aza matahotra ny vahoaka, ary aza matahotra ny fanafihana.
4:9 Tsarovy amin'ny fomba ahoana ny famonjena dia tonga amin 'ny razany tao amin'ny Ranomasina Mena, fony izy nenjehin'i Faraona mbamin'ny miaramila betsaka.
4:10 Ary ankehitriny, aoka isika ho any an-danitra dia mitaraina, ary ny Tompo dia mamindrà fo aminay, dia hahatsiaro ny fanekena tamin'ny razantsika, dia hanorotoro io tafika io teo face anio.
4:11 Ary ny firenena rehetra ho fantany fa misy Iray izay manavotra sy manafaka ny Isiraely. "
4:12 Ary ny hafa firenena nanopy ny masony, ary nahatazana azy ireto tamy hamely azy.
4:13 Dia nivoaka ny toby hiady, sy ireo izay niaraka nitsoka ny anjomara Jodasy.
4:14 Dia nivory. Ary ny hafa firenena no torotoro fo, ary dia nandositra ho any an-tani-hay.
4:15 Fa ny farany ny olona rehetra lavon-tsabatra, ary nanenjika azy hatrany Gazara, ary na dia ny tani-hay any Edoma, ary Azota, ary Jamnia. Dia nahazo azy ireo olona maro araka izay telo arivo lahy.
4:16 Ary Jodasy niverina, sy ny miaramila nanaraka azy.
4:17 Ary hoy izy tamin'ny vahoaka: "Aza mitsiriritra ny babo; fa tsy misy ady eo anoloantsika.
4:18 Ary Gorjiasa sy ny miaramilany dia akaiky antsika teo an-tendrombohitra. Fa mafy orina izao hamely ny fahavalontsika, ary hiady aminy, ary dia haka ny babo rehefa afaka izany,, tsy manana ahiahy. "
4:19 Ary raha mbola niteny Jodasy ireo teny ireo, indro, ny vola sasany vidiny taminy niseho, mijery avy any an-tendrombohitra.
4:20 Ary Gorjiasa nahita fa ny olony dia nampandositra, ary efa napetrany afo ho amin'ny toby. Fa ny setroka fa nahita ny zava-nitranga dia nanambara.
4:21 Rehefa nahita izany, dia nanjary raiki-tahotra indrindra, nahita tamin'izany andro izany sady Jodasa sy ny tafiny tao Arbota vonona hanao ady.
4:22 Ary izy rehetra nandositra nankany an-toby ny hafa firenena.
4:23 Ary Jodasy niverina hampakatra ny babo ny toby, ary nahazo volamena sy volafotsy be dia be, ary hyacinth, sy volomparasy any an-dranomasina, ary harem-bevava.
4:24 Ary niverina, dia nihira ny canticle, ary nisaotra an'Andriamanitra any an-danitra, satria tsara, noho ny famindram-pony dia amin'ny taranaka rehetra.
4:25 Ary noho izany, famonjena lehibe nitranga tamin'ny Isiraely amin'izany andro izany.
4:26 Fa izay rehetra eo amin'ny hafa firenena izay afa-nandositra nandeha ka nilaza tamin'i Lisiasa rehetra efa nanjo.
4:27 Ary rehefa nandre izany, dia kivy, rehefa taitra ny ny ainy. Fa tsy ny zavatra nitranga teo amin'ny Isiraely araka ny tiany, na tahaka ny mpanjaka efa nandidy.
4:28 Ary, ao amin'ny taona manaraka, Lysia namory voafantina enina alina, ary an-tsoavaly dimy arivo, ka mba handresy azy amin'ny ady.
4:29 Ary dia tonga tany Jodia, ary dia napetraka ny toby any Beti-zora, ary Jodasy nitsena azy ny iray alina lahy.
4:30 Ary nahita ny herin'ny tafika, ary toy izany koa nivavaka, ka hoy Izy:: "Sambatra ianao, Mpamonjy ny Isiraely, izay nanorotoro ny fanafihana ny mahery ny tànan'i Davida mpanomponao, ary izay nanolotra ny tobin'ny hafa firenena ho eo an-tànan'i Jonathan, ny zanak'i Saoly,, ary ny mpitondra ny fiadiany.
4:31 Enclose io tafika io an-tànan'ny Isiraely olonao, ary aoka ho menatra eo amin'ny miaramila sy ny mpitaingin-tsoavaliny.
4:32 Asio izy ireo amin'ny tahotra, ary levona ny fahasahiana ny heriny, ary aoka izy Maharikoriko ao ny alahelony.
4:33 Noroahiny ho any amin'ny sabatra 'ireo izay tia anao, ary aoka izay rehetra mahalala ny anaranao hiderako anao an-hira. "
4:34 Dia nalefa hanafika, ary nahafatesana avy ny miaramilan 'Lisiasa dimy arivo lahy.
4:35 fa Lysia, nahita ny sidina sy ny fahasahiana ny Jiosy, ary izy ireo vonona na ho velona na ho faty amin'ny herimpo, nankany Antiokia ka nifidy miaramila, ka dia mba hiverina ho any Jodea miaraka amin'ny isa lehibe kokoa.
4:36 Ary Jodasa sy ireo rahalahiny nanao hoe:: "Indro, ny fahavalontsika efa torotoro. Andeha isika hiakatra ankehitriny mba hanadio sy manavao ny toerana masina. "
4:37 Sy ny miaramila rehetra nivory, Dia niakatra tao an-tendrombohitra Ziona.
4:38 Ary nahita ny fitoerana masina nandao, ary ny alitara voaloto, ary ny varavarana may, ary ahidratsy nipetraka tany amin'ny fitsarana, toy ny anaty ala na eny an-tendrombohitra, Ary ny efi-trano nifanila nandrava.
4:39 Ary dia nandriatra ny fitafiany, ary dia nanao fisaonana lehibe, ary nametraka lavenona ny lohany.
4:40 Dia lavo tamin'ny tany teo amin'ny tarehiny, ary nitsoka ny trompetra avo, Ary ny olona niantso ny lanitra.
4:41 Ary Jodasy nandamina ny olona mba hiady ireo izay tao amin'ny batery fiarovana, mandra-panadio ny fitoerana masina.
4:42 Dia nifidy mpisorona tsy misy kilema, izay no natao ho ny lalàn'Andriamanitra.
4:43 Ary nanadio ny toerana masina, ary dia nesorin'ny olona ny vato ny fahalotoana ho amin'izay fitoerana maloto.
4:44 Ary nandinika ny alitara fandoroana ny dorana, izay efa voaloto, ny amin'ny zavatra tokony hataony izany.
4:45 Ary ny torohevitra tsara nilatsaka taminy, mba handrava azy, fandrao dia mety ho latsa ho azy ireo, satria efa nandoto ny jentilisa izany; ka dia nandrava azy.
4:46 Ary napetrany ny vato ao an-tendrombohitra trano, eo amin'ny toerana mety tsara, mandra-ho avy ny mpaminany, iza no hanome valiny momba ireo.
4:47 Dia naka vato tsy voapaika, araka ny lalàna, ary nanangana otely anankiray vaovao, araka izay teo anoloan'ny.
4:48 Ary nanorina indray ny toerana masina sy ny zavatra izay teo amin'ny faritra anaty ny tempoly, ka dia nanamasina ny tempoly sy ny fitsarana.
4:49 Ary izy ireo nanao fanaka masina vaovao, ary izy ireo nitondra ny fanaovan-jiro, ary ny alitara fandoroana ditin-kazo manitra, ary ny latabatra ho eo an-kianjan'ny tempoly.
4:50 Dia napetrany ditin-kazo manitra teo ambonin'ny alitara, ary nampirehitra ny jiro, izay teny amin'ny fanaovan-jiro, ary nomeny fanazavana an-kianjan'ny tempoly.
4:51 Ary nametraka ny mofo eo ambony latabatra, ary dia nahanton'ny ny voaly, ka dia vita ny asa rehetra izay efa nanomboka.
4:52 Dia nitsangana teo anoloan'ny maraina, tamin'ny andro fahadimy amby roa-polo tamin'ny volana fahasivy, (dia ny volana Kislev) eo amin'ny efa-polo amby zato-taona fahavalo.
4:53 Ary namono zavatra hatao fanatitra, araka ny lalàna, teo amin'ny alitara ny dorana vaovao izay nataony.
4:54 Araka ny fotoana sy araka ny andro, izay ny jentilisa voaloto izany, tamin'izany andro izany, izany hihahenjana amin'ny tonon-kiran'i, sy ny valiha, sy ny lokanga, ary ny kipantsona.
4:55 Ary ny olona rehetra niankohoka, ary niankohoka, ary nisaotra andriana izy, ny lanitra, izay efa nanambina azy.
4:56 Ary no nitandremany ny fitokanana ny alitara ny valo andro, ary dia nanatitra fanatitra dorana amim-pifaliana, sy ny sorona ny famonjena sy ny fiderana.
4:57 Ary efa mihaingo hihaona ny tarehin'ny ny tempoly miaraka amin'ny satro-boninahitra volamena sy ny ampinga kely. Ary nanokana ny vavahady sy ny efi-trano nifanila, Ary napetany teo varavarana azy.
4:58 Ary dia nisy fifaliana lehibe indrindra teo amin'ny vahoaka, ary ny fahafaham-baraka 'ny Jentilisa dia voasoroka.
4:59 Ary Jodasy, sy ny rahalahiny, ary ny fiangonana, dia ny Isiraely namoaka didy fa ny andro ny fitokanana ny alitara dia tsy maintsy ho foana amin'ny fotoany, isan-taona, ny valo andro, avy amin'ny amby roa-polo andro fahadimy tamin'ny volana Kislev, amin'ny fifaliana sy ny firavoravoana.
4:60 Ary izy ireo nanao ny, tamin'izany fotoana izany, tendrombohitra Ziona, manda avo sy tilikambo mafy manodidina, fandrao ny hafa firenena dia tokony amin'ny fotoana rehetra avy ka hanitsaka aminy, toy ny taloha.
4:61 Ary nametraka ny miaramila any, mba hitandrina izany, ary nohamafisiny io tanàna io, mba hiambina Beti-zora, ka dia ny olona mety manana ny fanamafisana tandrifin'ny tavan'i Edoma.
1 Makabeo 5
5:1 Ary nony fa, rehefa nahare fa firenena nanodidina ny alitara sy ny fitoerana masina dia nisy indray toy ny teo aloha, izy ireo, dia tezitra loatra.
5:2 Ary nikasa handringana ny olona Jakoba izay teo aminy, ary nanomboka hamono ny sasany tamin'ny olona, ary nanenjika azy ireo.
5:3 Ary Jodasy resy tamin'ny ady tamin'ny taranak'i Esao tao Idomea, ary ireo izay tany Akrabattene, satria nanao fahirano ny Israelita, ary izy namely olona be dia kapoka.
5:4 Dia nahatsiaro ny lolompo taranak'i Baean, izay fandrika sy fanafintohinana ho an'ny vahoaka, ambany otrika ho azy ireo teny an-dalana.
5:5 Ary izy ireo dia voafandrika ankasitrahana aminy ny tilikambo, Ary naka ny toerana akaiky azy ireo, dia anathematized azy, ary nodorany ny tilikambony tamin'ny afo, miaraka amin'ireo rehetra izay tao aminy.
5:6 Avy eo dia niampita nankany amin'ny taranak'i Amona, ary nahita tanana mahery, ary be dia be ny olona, ary Timoty, dia ny mpifehy.
5:7 Ary mirotsaka amin'ny ady maro aminy, ka dia torotoro eo imasony, dia namely azy ireo.
5:8 Ary nosamboriny ny tanàna Jazera, sy ny rahavaviny tanàna, ary dia niverina ho any Jodea.
5:9 Ary ny hafa firenena, izay tany Gileada, tafangona hamely ny Israelita, izay ao anatin'ny fari-taniny, mba hitondra azy, ary toy izany koa dia nandositra ho any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana ny Dathema.
5:10 Dia nandefa taratasy ho Jodasa sy ireo rahalahiny, nanao hoe:: "Ary ny hafa firenena efa manodidina ny fiaraha-mivory hamely anay mba hitondra antsika hiala.
5:11 Efa miomana ho avy sy hipetraka ny fiarovana mafy ho any izay efa nandositra. Ary Timoty no komandin'ny ny tafika.
5:12 Ankehitriny, noho izany, tonga hanafaka anay amin'ny tànany, fa dia maro amintsika no lavo.
5:13 Ary ny rahalahy rehetra, izay tany amin'ny toeram-Tob, efa novonoina ho faty. Ary izy nitondra ho babo ho babo ny vadiny, ary ny zanany, sy ny babo. Eny, novonoiny efa ho arivo lahy teo izy. "
5:14 Ary raha mbola mbola mamaky ireo taratasy ireo, indro, nisy tonga avy tany Galilia iraka hafa, miaraka amin'ny fitafiana rovitra, izay nanambara araka izany teny izany:
5:15 nilaza fa ny an'i Ptolemaisa sy Tyro sy Sidona no nivory hanohitra azy, "Ary Galilia efa feno vahiny, mba handevona anay. "
5:16 Koa dia, rehefa Jodasa sy ny vahoaka nandre izany teny izany, fiangonan-dehibe dia nivory, mba handinika izay tokony hataony ho an'ireo rahalahiny izay teo azom-pahoriana ka ho nanafika azy ireo.
5:17 Ary hoy Jodasa tamin'i Simona rahalahiny: "Mifidiana lehilahy ho anao, ka mandehana, ary manafaka ny rahalahinao any Galilea. Fa izaho sy ny rahalahiko Jonathan, Aoka hiditra any amin'ny tany Gileada. "
5:18 Dia namela Joseph, zanak'i Zakaria, ary Azaria, tahaka ny mpifehy ny vahoaka, miaraka amin'ny sisa amin'ny tafika, tany Jodia, hiambina azy.
5:19 Ary nandidy azy ireo, nanao hoe:, "Raiso anjara-raharaha momba ity vahoaka ity, fa tsy handeha hiady ny amin'ny jentilisa, mandra-piverinay. "
5:20 Ary telo arivo lahy no nizara ho Simon, mba handeha ho any Galilia, fa valo arivo amby iray alina no nizara ho Jodasy, hankany amin'ny tany Gileada.
5:21 Ary Simona dia nankany Galilia, ary dia mirotsaka amin'ny ady maro ny jentilisa, ary ny jentilisa Torotoroiko eo anatrehany, dia nanenjika azy hatramin'ny vavahadin'i Ptolemaisa.
5:22 Ary nahafatesana ny hafa firenena efa ho telo arivo lahy, ka dia naka ny babo.
5:23 Ary nentiny niaraka taminy ireo izay tany Galilia sy Arbatta, ny vady aman-janany, sy izay rehetra azy, dia nitondra azy ho any Jodea tamin-kafaliana lehibe.
5:24 Ary Jodasy Makabeo, ary Jonatasa rahalahiny, tafita an'i Jordana, Ary ireo dia nandeha làlan-kateloana tany an-efitra.
5:25 Ary ny Nabateans nihaona izy ireo, ary dia nanaiky azy ireo am-pilaminana, ary dia nilaza taminy izay rehetra efa nanjo ny rahalahiny tany amin'ny tany Gileada,
5:26 ary fa maro tamin'izy ireo no Voafandrika ao Bozra, ary Bosora, ary alema, ary in Chaspho, ary Makeda, ary karnaima. Ireo rehetra ireo no lehibe sy ny tanàna voaro mafy.
5:27 Koa, dia natao tao amin'ny tanan'ny any amin'ny tanàna hafa Gileada, ary efa fandaharana hifindra ny tafika, amin'ny andro manaraka, any amin'ireo tanàna ireo, ary hisambotra azy ireo, ary handringana azy rehetra amin'ny indray andro monja.
5:28 Ary Jodasa sy ny tafiny niova tampoka ny lalana ho any an-efitra, ho Beora, ary nibodo ny tanàna. Dia namono ny lehilahy rehetra amin'ny lelan-tsabatra, ary nentiny daholo ny babo, sy nandoro azy tamin'ny afo.
5:29 Dia nitsangana niala teo amin'ny alina, ary dia nandeha nivoaka ny lalana rehetra ho any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana.
5:30 Ary nony fa, tamin'ny voalohany hazavana, nony nanandratra ny masony, indro, nisy maro ny olona, izay tsy azo isaina, nitondra tohatra sy milina, mba hisambotra ny tanàna mimanda ny fandravana, ary ny hanafika azy ireo.
5:31 Ary Jodasy hitany fa efa nanomboka ny ady, ary ny fitarainan'ny tao an-ady niakatra ho any an-danitra tahaka ny an'ny anjomara, sy nitaraina mafy nivoaka avy tao an-tanàna.
5:32 Ary hoy izy tamin'ny miaramilany, "Miadia anio ho an'ny rahalahinareo."
5:33 Ary tonga, amin'ny telo toko aoriany, ary nitsoka ny anjomara, dia niantso izy amin'ny vavaka.
5:34 Ary ny tobin'ny Timoty nahafantatra fa i Makabeo, ary dia nitondra nandositra eo anatrehany. Ary izy ireo namely olona be dia kapoka. Dia nahazo azy amin'izany andro izany efa ho valo arivo sy iray alina.
5:35 Ary Jodasy navily ho any Mizpa, izy ka namely ka nisambotra azy. Ary izy namono ny lehilahy rehetra, ka dia naka ny babo, Ary nandoro azy tamin'ny afo.
5:36 avy teo, dia nanohy, Ary nosamboriny Chaspho, ary Makeda, ary Bosora, ary ny sisa amin'ny tanànan'i Gileada.
5:37 Fa rehefa afaka izany fisehoan-javatra, Timoty namory tafika hafa, ary dia napetraka ny toby tandrifin'i Raphon, manerana ny lohasahan-driaka.
5:38 Ary Jodasy dia naniraka olona mba hahazo imason'ny tafika. Ary dia nilaza indray aminy, nanao hoe:: "Ny firenena rehetra izay manodidina antsika no nivory teo anatrehany, miaraka amin'ny tafika lehibe izaitsizy tokoa.
5:39 Ary izy ireo nitondra ny Arabo ho mpanampy ho azy ireo, Ary efa nanangana toby manerana ny lohasahan-driaka, amin'ny fiomanana mba ho avy hiady aminareo amin'ny ady. "Ary Jodasy nandroso hitsena azy ireo.
5:40 Ary Timoty hoy izy tamin'ny mpitarika ny miaramilany: "Rehefa Jodasa sy ny tafiny fomba, akaiky ny lohasahan-driaka ny rano, raha miampita eo amintsika aloha, dia tsy ho afaka ny hanohitra azy. Fa ho afaka ny haharesy antsika.
5:41 Raha, tena, dia natahotra ny hiampita ny, ary toy izany koa dia mametraka ny toby manerana ny ony, dia hiampita ho azy, ka dia haharesy azy. "
5:42 Ary rehefa nanatona i Jodasy, akaiky ny lohasahan-driaka ny rano, nametraka ny mpanora-dalàna ny olona akaiky ny lohasahan-driaka, Dia nandidy azy izy, nanao hoe:, "Avelao tsy hisy olona hijanona aoriana, fa aoka rehetra miditra ao an-ady. "
5:43 Ary nita ho azy aloha, ary ny vahoaka rehetra nanaraka azy. Sy ny jentilisa rehetra dia kivy eo anoloany, ary dia nariany ny fitaovam-piadiana, ary dia nandositra ho any amin'ny tempoly izay tao Karnaima.
5:44 Dia nibodo ny tanàna, ary nodorany tamin'ny afo ny tempoly, mbamin'ny zavatra rehetra izay teo anatiny. Ary Karnaima dia resy, Ary tsy nahajanona hanohitra ny tavan'ny Jodasy.
5:45 Ary Jodasy dia namory ny Isiraely rehetra izay tao an-tany Gileada, na ny kely na ny lehibe, ny vady aman-janany, ary maro be ny miaramila, ho tonga any amin'ny tany Joda.
5:46 Ary tonga hatrany Efrona. Ary izao no tanàna lehibe, napetraka teo amin'ny fidirana, mafy voaro mafy, ary tsy nisy lalana handeha manodidina azy teo amin'ny ankavanana, na amin'ny ankavia, fa ny lalana dia namaky teo afovoany izany.
5:47 Ary izay tao an-tanàna nihidy tao ary nasianao fefy vato ny vavahady. Ary toy izany koa Jodasa dia nampilaza taminy, nitondra teny fihavanana,
5:48 nanao hoe:, "Andao hamaky ny tany, hankany amin 'ny tany, ary tsy hisy hanisy ratsy anao; isika ihany no hiampita ny alalan 'an-tongotra. "Fa izy ireo tsy vonona hamoha varavarana ny azy ireo.
5:49 Ary Jodasy Nandidy Fanambarana ho azo atao ao an-toby, fa efa ho anjara azy ireo, samy avy ao amin'ny nitoerany ihany Izy.
5:50 Ary ny lehilahy tao an-tafika mby akaiky. Ary namely ny tanàna mandritra ny andro sy mandritra ny alina. Ary ny tanàna dia natolotra teo an-tànany.
5:51 Ary nandringana ny lehilahy rehetra tamin'ny lelan-tsabatra, ary fanafoanana ny tanàna, ka dia naka ny babo, ary dia nita ny alalan 'ny tanàna iray manontolo, noho ireo izay efa voavono.
5:52 Avy eo dia niampita an'i Jordana ho any amin'ny tany lemaka lehibe izay tandrifin'ny ny tavan'i Beti-sana.
5:53 Ary Jodasy dia nanangona ny stragglers ka nananatra ny olona, manerana ny lalana manontolo, mandra-pahatongany any amin'ny tanin'ny Joda,.
5:54 Dia niakatra tao an-tendrombohitra Ziona amim-pifaliana sy firavoravoana, ary dia nanatitra fanatitra dorana, satria tsy iray efa nahazo azy, raha tsy efa niverina soa aman-tsara.
5:55 Ary tamin'ny andro izay Jodasy sy Jonatana, izay tany amin'ny tany Gileada, ary Simona rahalahiny tany Galilia manohitra ny tavan'i Ptolemaisa:
5:56 Joseph, ny zanak'i Zakaria, ary Azaria, ny mpitarika ny tafika, nahare zavatra tsara momba ny ady izay niady.
5:57 Ary hoy izy:, "Aoka koa isika hanao anarana ho an'ny tenantsika, ary aoka isika handeha hiady amin'ny jentilisa izay manodidina antsika. "
5:58 Dia nandidy ireo tao an-tafika, ary lasa nandeha izy ireo nankany Jamnia.
5:59 Ary Gorjiasa sy ny olony nivoaka ny tanàna, mba hitsena azy teo amin'ny ady.
5:60 Ary Josefa sy Azaria dia voatery nandositra, hatrany amin'ny sisin-tanin'i Jodia. Dia nahazo tamin'izany andro izany, avy amin'ny olona Isiraely, ka ny roa arivo lahy, ary efa resy lehibe ho an'ny olona.
5:61 Fa izy ireo tsy nihaino an'i Jodasa mbamin'ireo rahalahiny, satria nataony fa tokony hanao zavatra amim-pahasahiana.
5:62 Fa ireo kosa dia tsy avy amin'ny taranaky ny ireo olona amin'ny alalan'ny famonjena izay nentina ho any Isiraely.
5:63 Ary ny lehilahy amin'ny Joda dia hohalehibiazina indrindra teo imason'ny Isiraely rehetra sy ny firenena rehetra izay ny anarany re.
5:64 Ary ny olona nivory ho azy ireo amin'ny tsara acclamations.
5:65 Ary toy izany koa Jodasa sy ny rahalahiny nivoaka ka nanafika ny taranak'i Esao, any amin'ny tany izay manatrika ny atsimo, ary izy namely Hebrona sy ny rahavaviny tanàna, Ary nandoro ny mandany sy ny tilikambo manodidina azy amin'ny afo.
5:66 Ka dia nanome saina ny toby mba handeha ho any amin'ny tanin'ny hafa firenena, ary dia nandeha tamin'ny alalan'i Samaria.
5:67 Amin'izany andro izany, ny sasany dia voafafy teny amin'ny ady mpisorona. Koa satria izy te hanao zavatra amim-pahasahiana, dia nivoaka, tsy misy torohevitra, ho any an-ady.
5:68 Ary Jodasy, dia nihodina ho any Azota, ho any amin'ny tanin'ny hafa firenena, Ary nandrava ny alitarany, Ary nandoro ny sarivongana, izay andriamaniny amin'ny afo. Ary nosamboriny ilay babo ny tanàna, dia niverina ho any amin'ny tanin'ny Joda,.
1 Makabeo 6
6:1 Ary Antiokosa mpanjaka dia nandeha ny alalan 'ny faritra ambony, ary efa reny fa ny tanànan'i Elymais any Persia dia tena ambony sy be volafotsy sy ny volamena,
6:2 ary ny tempoly ao fa tena nanankarena, ary dia nisy, amin'izany toerana, firakotra volamena, ary fiarovan-tratra sy ampinga, izay Alexander, ny zanak'i Filipo, mpanjakan'i Makedonia, ilay nanjaka voalohany tany Gresy, nandao aoriana.
6:3 Dia avy izy ka nitady hisambotra ny tanàna sy ny horobain'ireo azy. Ary tsy afaka, satria izany drafitra nanjary fantatra ho an'izay tao an-tanàna.
6:4 Dia nifoha tamin'ny ady, ka dia nandositra niala teo, ary dia niala tamin'ny alahelo lehibe, ary niverina ho any Babylona.
6:5 Ary nisy olona tonga mba hitatitra azy tao Persia, fa ireo izay tao an-tanin 'i Joda, dia voatery nandositra ny toby,
6:6 ary Lisiasa nandeha tamin'ny tafika matanjaka indrindra, ka dia voatery nandositra teo anoloan'ny Jiosy, ary izy ireo dia nampahery ny fitaovam-piadiana, ary ny loharano, ary maro babo izay nosamboriny avy any amin'ny toby izy ireo nandrava,
6:7 ary efa nandrava ny fahavetavetana, izay efa naorina teo ambonin'ny alitara izay tao Jerosalema, ary ny fitoerana masina, fotsiny toy ny teo aloha, efa nanodidina manda avo, niaraka tamin'i Beti-zora, an-tanànany.
6:8 Ary nony fa, rehefa ren'ny mpanjaka izany teny izany, dia raiki-tahotra, ary tena nahatonga. Dia niankohoka teo am-parafarany, Ary latsaka tao fahosana avy ny alahelo. Fa tsy mbola nitranga taminy araka izay efa natao.
6:9 Ary mbola teo amin'ilay amin'ny alalan'ny andro maro. Fa lehibe hihahenjana alahelo ao aminy, ary nanatsoaka hevitra fa ho faty izy.
6:10 Ary Jesosy niantso ny sakaizany, ary hoy izy taminy: "Torimaso efa lasa niala ny masoko, ary mihena aho, ary ny foko dia nirodana avy amin'ny fanahiana.
6:11 Ary hoy aho tao am-poko: Inona no fahoriana be no tonga atỳ amiko, ary inona no tondra-drano ny alahelo misy, izay misy aho izao! Aho taloha mba ho falifaly sy tiana teo amin'ny fanjakako!
6:12 Marina tokoa, ankehitriny, Tsaroako ny ratsy izay nataoko tany Jerosalema, ary avy any koa nobaboiny avokoa ny babo volamena sy volafotsy izay tao aminy, ary naniraka ny hitondra ny mponina tao Joda, tsy misy antony.
6:13 Noho izany, Fantatro fa izany dia noho ny zava-dratsy izany fa ireo efa nahita ahy. Ary indro, Izaho kosa maty tamin'ny alahelo mafy any an-tany hafa. "
6:14 Dia niantso an'i Filipo, iray tamin'ireo namany, ary nampitoeriny azy rehetra aloha ny fanjakany.
6:15 Ka dia nomeny azy ny diadema, ary ny akanjony, ary ny peratra fanombohany, ka fa izy dia hitarika Antiokosa, zanany, ary hanangana azy, ary toy izany koa fa nanjaka.
6:16 Ary maty teo mpanjaka Antiokosa, eo amin'ny efa-polo amby zato taona fahasivy-.
6:17 Ary Lysia nahalala fa maty ny mpanjaka, ary izy nanendry an'i Antiokosa, zanany, nanjaka, ilay natsangany tamin'ny zatovo. Ary ny anarany nataony hoe Eupator.
6:18 Ary izay teo tao amin'ny batery fiarovana dia fonosina ny Israelita amin'ny manodidina ny toerana masina. Ary izy ireo nitady mandrakariva ny hanao ratsy ho azy ireo sy hanohana ny hafa firenena.
6:19 Ary Jodasy natao mba hanaparitahana azy ireo. Ary namory ny olona rehetra, mba hanao fahirano azy.
6:20 Ary dia tonga izy ka nanao fahirano azy ireo niara ao amin'ny amby dimam-polo amby zato taona, ka dia nanao pitifirana sy ny milina hafa.
6:21 Ary ny sasany ireo, izay nanao fahirano, afa-nandositra. Ary ny sasany tamin'ny ratsy fanahy tamin'ny Isiraely niray taminy.
6:22 Dia nankany amin'ny mpanjaka, ka hoy izy:: "Mandra-pahoviana ianao no tsy manao amin'ny fitsarana, ary hanamarina ny rahalahy?
6:23 Tapa-kevitra isika ny hanompo ny rainao, ary handeha araka ny didiny, ary hankatò ny edicts.
6:24 Ary noho izany, ny zanaky ny olona tafasaraka ny tenany amintsika, ary efa novonoina ho maro amintsika no ho afaka hahita, ary efa rovitra ny lova masina.
6:25 Ary tsy nanitatra ny tànany hamely anay ihany no, fa koa manohitra ny fari-taniny rehetra ao anatin'ny.
6:26 Ary indro, androany dia efa naka ny toerana akaikin'ny fiarovana mafy Jerosalema mba hibodo azy io, ary efa nohamafisiny ny batery fiarovana, dia Beti-zora.
6:27 Ary, raha tsy manao zavatra haingana mba tsy azy ireo, izy ireo hanao asa lehibe noho izany, ary dia tsy ho afaka ny handresy azy ireo. "
6:28 Ary ny mpanjaka dia tezitra mafy raha naheno izany. Ary namory ny sakaizany, ary ny mpitarika ny miaramilany, ary ireo izay nifehy ny mpitaingin-tsoavaly.
6:29 Fa tsy dia nanatona Azy ny tafika mpikarama an'ady avy amin'ny fanjakana hafa sy amin'ny nosin-dranomasina.
6:30 Ary ny isan'ny tafiny dia miaramila an-tongotra iray hetsy, ary ny mpitaingin-tsoavaly roa alina, ary amby telo-polo elefanta roa niofana ho an'ny ady.
6:31 Ary ireo dia nandeha tamin'ny alalan'i Idomea, ka dia naka toerana akaikin'i Beti-zora. Ary niady nandritra ny andro maro, ka dia nanao milina ny ady. Anefa izy ireo nivoaka ka nandoro azy tamin'ny afo, dia niady amim-boninahitra.
6:32 Ary Jodasy niala avy amin'ny batery fiarovana, ka dia nanome saina an-toby tany Bethzechariah, tandrifin'ny tobin'ny mpanjaka.
6:33 Ary ny mpanjaka nitsangana, tsy mbola nisy teo mazava, ary dia voatery ny miaramilany mba diabe mankany amin'ny lalan'ny Bethzechariah. Ary ny tafika niomana hiady, ary nitsoka ny anjomara.
6:34 Ary nampiseho ny elefanta ny ram-boaloboka sy ny mulberries, ka nampahatezitra azy ireo mba hiady.
6:35 Ary dia nizara ny biby ny legiona, ary nijanona teo akaikin'ny elefanta rehetra arivo lahy, miaraka amin'ny ampinga tafakambana sy fiarovan-doha varahina ny lohany. Diman-jato amby tsara-baiko mpitaingin-tsoavaly no voafidy ho an'ny biby rehetra.
6:36 Ireo no vonona mialoha, ary na aiza na aiza ny bibi-dia, izy ireo teo; ary isaky ny nifindra, dia nifindra, Ary izy ireo tsy hiala amin'izany.
6:37 Koa, azy nisy tilikambo hazo mafy, mijery ny biby rehetra, amin'ny milina azy, ary teo aminy dia roa amby telo-polo lehilahy mahery, izay niady avy any ambony, ary ny Indiana hanapaka biby tsirairay.
6:38 Ary ny sisa amin'ny mpitaingin-tsoavaly, nametraka etsy sy eroa, ao amin'ny faritra roa, trompetra mba hamporisika ny tafika sy ny nampirisika an'ireo izay tsy mora ny hifindra ao ny legiona.
6:39 Ary noho izany, rehefa niposaka ny masoandro hita taratra eny ny ampinga volamena sy varahina, ny tendrombohitra dia mamirapiratra avy aminy, ary nankatoaviny tahaka ny fanilo mirehitra.
6:40 Ary anisan'ny tafiky ny mpanjaka nizara roa toko ny tendrombohitra avo, ary ny hafa ho any amin'ny ambany anjara toerana. Dia nandeha Izy mbamin'ny filaminana sy malina.
6:41 Ary ny mponina rehetra amin'ny tany nihozongozona Noho ny feon'ny ny vahoaka, ary araka ny mialoha ny orinasa, ary araka ny fifandonana ny fiadiana. Fa ny tafika tena lehibe sy mahery.
6:42 Ary Jodasa sy ny tafiny hiady nanakaiky. Dia nahazo ny tafiky ny mpanjaka enin-jato lahy.
6:43 ary Eleazara, ny zanak'i Saura, nahita olona anankiray ny biby voaaro amin'ny mpanjaka ampinga, ary nanan-tombo noho ny biby hafa. Dia toy izany no toa azy fa ny mpanjaka dia tsy maintsy ho izany.
6:44 Dia nanolotra ny tenany noho ny fahafahana ny vahoakany, ary mba hahazoana ho an'ny tenany anarana any amin'ny mandrakizay.
6:45 Dia nihazakazaka niakatra ho azy tamim-pahasahiana teo afovoan'ny ny legiona, nahafaty amin'ny ankavanana na amin'ny ankavia, dia niankohoka teo anatrehany ny tamin'ny lafiny iray, ary ny.
6:46 Ary nandeha teo anelanelan'ny tongotry ny elefanta, ka nataony tena ambaniny, Dia novonoina iny. Ary lavo tamin'ny tany azy, ka dia maty teo.
6:47 Ary, nahita ny herin'ny mpanjaka sy ny tamin-kery ny miaramilany, dia nihodina niala teo aminy ny tenany.
6:48 Fa ny mpanjaka toby, niakatra hamely azy ireo tao Jerosalema. Ary ny mpanjaka toby nibata toerana akaikin'ny Jodia sy an-tendrombohitra Ziona.
6:49 Ary nanao fihavanana tamin'ny olona izay tany Beti-zora. Dia niala tao an-tanàna, satria tsy nisy fepetra ny fotoana nihazonana, fa ny Sabata amin'ny tany.
6:50 Ary ny mpanjaka nahafaka Beti-zora, ary nametraka ny miaramila teo, hiandry ny.
6:51 Ary Jesosy nitodika nijery ny toby hamely ny tanàna ny fanamasinana nandritra ny andro maro. Dia nijanona teo pitifirana sy ny milina hafa: milina hanipy afo, ary windlasses hanipy vato sy zana-tsipika, ary kely pitifirana mba nanipy zana-tsipìka sy ny vy.
6:52 Anefa izy ireo koa nanao milina hanohitra ny milina, dia niady nandritra ny andro maro.
6:53 Saingy tsy nisy sakafo tao an-tanàna, satria taona fahafito. Ary ireo izay efa nitoetra tany Jodia dia avy any amin'ny jentilisa, ka levona izay rehetra efa sisa avy ny zavatra efa namory.
6:54 Ary nijanona tao amin'ny fitoerana masina ny olom-bitsy, noho ny mosary efa naharesy azy. Dia miely izy, samy ho any amin'ny fonenany.
6:55 Ary Lysia reny fa Filipo, Antiokosa mpanjaka izay notendreny, fony Izy mbola velona, hitaiza ny zanany, Antiokosa, ary nanjaka,
6:56 dia niverina avy tany Persia sy Media, ny miaramila izay nandeha niaraka taminy, ary dia nitady ny hitondra eo Aminy ny raharahan 'ny fanjakana.
6:57 Dia lasa faingana izy handeha hoy ny mpanjaka sy ny mpifehy ny miaramila: "Malemy izahay isan'andro, ary ny sakafo dia voafetra, ary ny toerana isika dia matanjaka fahirano, ary dia am-perinasa antsika hametraka ny fanjakana mba.
6:58 Ary toy izany koa ankehitriny, aoka isika manome antoka ireo lehilahy ireo, ary hihavana aminy sy amin'izy rehetra iray firenena.
6:59 Ary aoka isika mametraka ho azy ireo mba handeha araka ny lalàny, fotsiny toy ny teo aloha. Fa, noho ny lalàna, izay tsinontsinona, dia tonga tezitra ary efa nanao izany rehetra izany. "
6:60 Ary ny hevitra no ankasitrahana eo imason'Andriamanitra ny mpanjaka sy ny mpitondra. Ary izy naniraka azy ireo hanao fihavanana. Dia nanaiky izany.
6:61 Ary ny mpanjaka sy ny mpanapaka dia nianiana taminy. Dia niala tao amin'ny batery fiarovana.
6:62 Ary ny mpanjaka niditra tao an-tendrombohitra Ziona, ka nahita ny manda ny toerana, ary toy izany koa dia nanapaka tampoka ny fianianana izay efa nianianany, Ary Izy nandidy ny manodidina manda ho ringana.
6:63 Ary dia niala faingana ka niverina nankany Antiokia, izay nahitany an'i Filipo mitondra ny tanàna. Ary niady taminy ka nibodo ny tanàna.
1 Makabeo 7
7:1 Ao ny iray dimam-polo amby zato taona-, Demetriosa, ny zanak'i Séleucus, niala an-tanànan'i Roma, ary dia niara-niakatra olom-bitsy any amin'ny tanàna dranomasina, ary nanjaka tao.
7:2 Ary nony fa, raha niditra tao an-tranon'i ny fanjakan'ny razany, ny miaramila Antiokosa sy Lisiasa nahafaka, mba ho entina any aminy.
7:3 Ary ny raharaha nanjary fantatry ny azy, ka hoy Izy:, "Aza mampiseho ahy ny tarehiny."
7:4 Ary toy izany koa ny miaramila namono azy. Ary Demetriosa nipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakany.
7:5 Ary nisy nanatona Azy iniquitous sy ny ratsy fanahy ny lehilahy amin'ny Isiraely. Ary Alsima no mpitondra azy ireo, izay te ho nanao mpisorona.
7:6 Ary niampanga ny olona ho any amin'ny mpanjaka, nanao hoe:: "Jodasy sy ny rahalahiny dia efa nandrava ny namana rehetra, ary efa niparitaka antsika avy amin'ny tany.
7:7 Ankehitriny, noho izany, handefa lehilahy, izay matoky, ary aoka izy handeha ka jereo ny fandringanana izay efa nataony taminay, ary tany amin'ny tany ny mpanjaka. Ary aoka izy hanasazy ny namany rehetra sy ny mpanampy azy. "
7:8 Ary toy izany ny mpanjaka nifidy, avy eo anivon 'ny namany, Bakidesa, izay nanjaka manerana ony lehibe ao amin'ny fanjakan'ny, ary izay mahatoky amin'ny mpanjaka. Ary Jesosy nampody azy
7:9 ny mahita ny fandringanana izay nataon'i Jodasy. Koa, Nanao ny ratsy fanahy Alsima ny fisoronana, ary nandidy azy mba hamaly faty amin'ny Zanak'Isiraely.
7:10 Dia niainga izy ka nivoaka mbamin'ny miaramila betsaka ho any amin'ny tanin'ny Joda,. Dia naniraka olona, izay niteny tamin'i Jodasa sy ireo rahalahiny, nitondra teny fihavanana, in fitaky.
7:11 Anefa izy ireo no tsy manaraka ny teniny, satria hitany fa tonga mbamin'ny miaramila betsaka.
7:12 Ary dia nivory ny Alsima sy Bakidesa, ny fiangonana, dia ny mpanora-dalàna, mba hitady iombonana.
7:13 ary aloha, ny Hasideans, izay teo amin'ny Zanak'Isiraely, koa nitady fiadanana avy aminy.
7:14 Fa hoy izy ireo:, "Ny lehilahy dia mpisorona avy amin'ny taranak'i Arona no tonga; izy, dia tsy hamitaka antsika. "
7:15 Ary Izy niteny taminy teny am-pilaminana, Dia nianiana taminy, nanao hoe:, "Tsy misy ratsy hanatanteraka hamely anao, na ny namanao."
7:16 Dia nino Azy. Ary nahafaka enim-polo ny olona ka namono azy tao anatin'ny iray andro, araka ny teny izay voasoratra:
7:17 Ny nofon'ny olonao masina, ary ny ràny, izy no nampidina ny manodidina an'i Jerosalema, ary tsy nisy olona handevina azy ireo izay ho.
7:18 Avy eo fahatahorana sy ny fangovitana Nihevaheva rehetra ny olona. Fa hoy izy ireo:: "Tsy misy marina na ny didim-pitsarana eo aminy. Fa efa nivadika ny fifanarahana sy ny fianianana izay dia nianiana. "
7:19 Ary nifindra ny toby Bakidesa avy tany Jerosalema, Ary naka ny toerana tao Bethzaith. Ary dia naniraka ka nahafaka maro izay efa nandositra azy, ary ny sasany tamin'ny vahoaka dia maty tamin'ny sorona, Ary natsipiny ho eo an-davaka lehibe anankiray.
7:20 Avy eo dia nanao ny firenena Alsima, ary namela miaramila niaraka taminy mba hanampy azy. Ary toy izany Bakidesa lasa nandeha ho any amin'ny mpanjaka.
7:21 Ary nanao izay Alsima izay tiany amin'ny alalan'ny mpitarika ao amin'ny fisoronana.
7:22 Ary ireo rehetra izay sahiran-tsaina ny vahoaka nivory teo anatrehany, ka dia nahazo ny tanin'i Joda, Ary nampandeha lehibe teo amin'ny Isiraely kapoka.
7:23 Ary hitan'i Jodasa ny ratsy rehetra izay Alsima, sy ireo izay niaraka taminy, nataony tamin'ny Zanak'Isiraely, mihoatra noho ny nataon'ny jentilisa.
7:24 Dia nivoaka ho any amin'ny faritra rehetra manodidina Jodia, ary dia naka famaliana ny olona izay efa nikomy, Ary dia nitsahatra ny mivoaka ho any amin'ny faritra intsony.
7:25 Fa hitan'i Alsima fa Jodasy, sy ireo izay niaraka taminy, nahery. Ary fantany fa tsy afaka nahatohitra azy. Ary noho izany dia niverina ho any amin'ny mpanjaka, Ary niampanga azy ireo ny maro ny heloka bevava.
7:26 Ary ny mpanjaka naniraka Nikanora, iray ny tena andriana, izay ny mpamboly ny fankahalana tamin'ny Isiraely. Dia nandidy azy mba hanongana ny olona.
7:27 Ary tonga tany Jerosalema Nikanora mbamin'ny miaramila betsaka, ary dia naniraka tany amin'i Jodasa mbamin'ireo rahalahiny teny fihavanana, amin'ny fitaky,
7:28 nanao hoe:: "Aoka re mba tsy hisy ady amiko sy ianao. Ho avy aho miaraka amin'olona vitsivitsy, ny mahita ny tarehinareo amin'ny fiadanana. "
7:29 Ary tonga tany Jodasy, ary niarahaba ny iray hafa ao amin'ny hifandimby, fihavanana. Ary ny fahavalo dia vonona mba abduct Jodasy.
7:30 Ary ny drafitra nanjary fantatry ny Jodasy, dia nanatona Azy amin'ny fitaka. Ary noho izany dia nanjary natahotra azy, ary izy tsy vonona ny hahita ny tavany.
7:31 Ary Nikanora nahafantatra fa ny drafitra efa hita, ary dia nivoaka hitsena an'i Jodasy tamin'ny ady akaikin'i Capharsalama.
7:32 Ary nahafatesana ny tafik'i Nikanora efa ho dimy arivo lahy, ary dia nandositra ho any an-Tanànan'i Davida.
7:33 Ary rehefa afaka izany fisehoan-javatra, Nikanora niakatra tany an-tendrombohitra Ziona. Ary ny sasany tamin'ny mpisorona ny olona dia nandeha nivoaka mba hiarahaba azy soa aman-tsara, ary mba hampiseho azy ny sorona dorana izay natolotra ho an'ny mpanjaka.
7:34 Fa nihomehy ka natao ho tsinontsinona azy ireo, Ary nolotoiny koa izy ireo. Ary izy niteny nirehareha,
7:35 Ary nianiana ny fahatezerany, nanao hoe:, "Raha tsy Jodasa sy ny tafiny efa hatolotra eo an-tanako, rehefa miverina soa aman-tsara, Dia handoro ity trano ity. "Ary dia nandeha Izy mbamin'ny tezitra mafy.
7:36 Ary ny mpisorona niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tavan'ny ny alitara sy ny tempoly. ary nitomany, hoy izy ireo:
7:37 "ianao, Tompo O, efa nifidy ity trano ity mba ny anaranao mba azo hampiharina eo, ka mba ho trano fivavahana sy ny fifonana ho an'ny olona.
7:38 Hanatanteraka fanamarinana miaraka io lehilahy io sy ny tafiny, ary aoka izy ireo lavon-tsabatra. Tsarovy ny fitenenan-dratsy, ary aza mamela azy ireo hanohy. "
7:39 Ary niala avy tany Jerosalema Nikanora, ary dia napetraka ny toby akaikin'i Beti-horona, ary ny miaramilan'ny Syria nitsena azy teo.
7:40 Ary Jodasy naka toerana tao Adasa telo arivo lahy. Ary Jodasy nivavaka, ka hoy Izy::
7:41 "Tompo ô, Ary izay nirahin'i Sankeriba mpanjaka niteny ratsy hamely anao, anjely iray nivoaka ka namely amby zato sy dimy arivo amby valo-tamin'izy ireo.
7:42 Just izany, hanorotoro io tafika io anio eo imasonay, dia aoka ny olon-kafa fantany fa efa nilaza ny loza hanjo ny fitoerana masina. Ka tsarao araka ny ratsy nataony. "
7:43 Ary ny tafika dia nampitondrainy ho ady miaraka amin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana Adara. Ary ny tobin'ny Nikanora dia nanorotoro, ary izy dia nitsangana teo afovoany voalohany novonoina tamin'ny ady.
7:44 Koa dia, raha ny tafiny nahita fa efa lavo Nikanora, kosa nariany ny fitaovam-piadiany, ary nandositra.
7:45 Dia nanenjika azy ny indray andro ny niala Adasa, na dia mandra-ny iray avy any Gazara, ary nitsoka ny anjomara nandimby azy tamin'ny famantarana.
7:46 Ary nony nivoaka avy tany amin'ny tanàna rehetra manodidina Jodia. Ary Mpiandry azy tamin'ny tandroka, ary dia niverina indray izy, ary izy rehetra nikapa tamin'ny sabatra, ary tsy nisy loatra tahaka ny anankiray amin'ireny tavela aoriana.
7:47 Ary nentiny ny babo toy ny babo, Dia notapahin'ireo ny lohan'i Nikanora, Ary ny tanany ankavanana, izay efa omena nirehareha, ary dia nentiny, ka nahantony izany tandrifin'i Jerosalema.
7:48 Ary faly ny vahoaka indrindra, ary nitoetra andro izany amin'ny fifaliana lehibe.
7:49 Ary nanorina fa androany dia tokony ho foana isan-taona, tamin'ny andro fahatelo ambin'ny folo tamin'ny volana Adara.
7:50 Ary ny tanin'ny Joda dia nampangina ho fohy ny fotoana.
1 Makabeo 8
8:1 Ary Jodasy nandre ny lazan'i ny Romanina, fa izy ireo dia mafonja sy mahery, ary izy ireo manaiky an-tsitrapo ny zava-drehetra izay nangataka azy ireo; ary izay, na iza na iza no manaiky hiara-azy ireo, dia nanorina ny namany izy ireo, ary toy izany koa izy ireo mahery vaika sy ny vahaolana.
8:2 Ary nahare ny ady, ary ny mahomby ny asa izay efa vita tany Galatia, Ahoana no efa nampietry azy, ary nitondra azy ireo eo ambany hetra,
8:3 ary inona no zavatra lehibe efa tanteraka ao amin'ny faritr'i Espaina, ary efa noroahina ambany ny heriny ny toeram-pitrandrahana volafotsy sy ny volamena izay misy, ary efa nahazo ny fizakana ny toerana rehetra, araka ny hevitra sy ny faharetana,
8:4 ary efa nandresy toerana izay tena manalavitra izany, ary ny mpanjaka, izay tonga hamely azy avy any amin'ny faran'ny tany, ary efa Mamely mafy azy ka namely olona be dia kapoka, raha ny sisa hetra ho azy ireo karama isan-taona,
8:5 ary efa nandresy tamin'ny ady Filipo, ary Perses ny mpanjakan'ny ny Ceteans, ary ny olon-kafa izay efa nandray fiadiana hamely azy, ary efa nanorotoro azy amin'ny ady ka nampietry azy,
8:6 ary ny fomba Antiôkosy, ny mpanjaka lehibe anankiray tamin'ny Asia, izay nitondra ny ady hamely azy, manana amby roa-polo amby zato sy elefanta, mpitaingin-tsoavaly, ary haingam-pandeha ny kalesy, ary maro be ny miaramila, dia nanorotoro ny azy ireo,
8:7 sy ny fomba efa nisambotra azy velona sy efa Namoaka didy ho azy fa dia izy sy ireo izay hanjaka handimby azy dia mandoa hetra lehibe, ary mba hanome takalon'aina maintsy fifanarahana,
8:8 ary ny faritra avy amin'ny Indiana, ary avy Mediana, sy ny mponin'i Lydia, avy eo amin'ny faritra tsara indrindra, amin'ireo izay efa nesorina taminy, dia notolorany ny mpanjaka Eumenes.
8:9 Ary ireo izay tany Gresy te hivoaka ka handresy azy ireo, Fa nanjary fantany izany drafitra.
8:10 Ary toy izany koa dia naniraka jeneraly iray ho azy ireo, ary dia niady taminy, ary maro tamin'izy ireo latsaka, ary dia nentiny ho babo ny vadiny, ary ny zanany, ka namabo azy, ary nandray ny fizakana ny taniny, ary dia nandrava ny manda ka namarina azy tao fanandevozana, mandraka androany.
8:11 Ary ny sisa fanjakana sy nosy, izay na oviana na oviana no nanohitra azy ireo, dia rava dia nandroaka ambany ny heriny.
8:12 Fa ny namany, ary ireo izay nitoetra tsara fihavanana aminy, izy ireo foana finamanana sy nandresy fanjakana: ireo izay akaiky, ary ireo izay lavitra. Fa izay rehetra nandre ny anarany dia matahotra azy.
8:13 Raha ny tena izy, na zovy na zovy izy ireo te hanampy ho lasa mpitondra, ireo no nanjaka, fa na zovy na zovy tiany, dia nesorina avy amin'ny fanjakana. Ary izy ireo Avo indrindra.
8:14 Ary izany rehetra izany, tsy nisy nanao fehiloha firavaka na niakanjo volomparasy, mba hankalazana amin'izany.
8:15 ary koa, efa nanao trano ho loholona, dia naka hevitra isan-andro, ary roa-polo amby telon-jato lahy, mitsahatra miasa ho toy ny torohevitra ho an'ny vahoaka, mba hanao ny zavatra izay tsara.
8:16 Ary manao ny fitondram-panjakana ny olona iray isan-taona, ho mpanapaka ny tany manontolo, ary izy rehetra manaiky ity, ary tsy misy fitsiriritana na fialonana eo aminy.
8:17 Ary toy izany koa i Jodasy nifidy Eupolemus, ny zanak'i John, ny zanak'i Jakoba, ary Jason, ny zanak'i Eleazara, ary dia naniraka azy ho any Roma mba hanao fifanarahana ny fisakaizana sy ny fifanekena aminy,
8:18 ary toy izany koa izy ireo fa hitondra hiala aminy ny ziogan'ny ny jentilisa koa, satria hitany fa nampahory ny fanjakan'ny Isiraely tamin'ny fanandevozana.
8:19 Dia nankany Roma, ny halavitry ny naleha, ary dia niditra tao amin'ny Antenimieran-doholona-trano, ka hoy izy:,
8:20 "Jodasy Makabeo, sy ny rahalahiny, ary ny vahoakan 'ny Jiosy, efa naniraka anay hankatỳ aminao mba hampitoetra aminareo ny fifanarahana sy ny fiadanana, ary toy izany koa mba ho voasoratra ara-panjakana eo amin'ny mpiara-miasa sy ny namana. "
8:21 Ary ny Teny dia ankasitrahana eo imasony.
8:22 Ary izao ny dika mitovy ny soratra, izay rewrote amin'ny takela-barahina sy nalefany ho any Jerosalema, ka dia ho aminy amin'izany toerana ho fahatsiarovana ny fiadanana sy ny fifanarahana:
8:23 "Enga anie hahita soa rehetra ny Romana sy ny firenena Jody, amin'ny ranomasina sy an-tanety, mandrakizay, ary aoka sabatra sy ny fahavalo ho lavitra azy ireo.
8:24 Fa raha misy ady no ajoro tamin'ny Romanina voalohany, na mandika ny anankiray ny mpiara rehetra ny fanapahany,
8:25 ny firenen'ny Jiosy hitondra fanampiana ho azy ireo, araka ny toe-javatra izay hitarihan, rehetra-amin'ny fo.
8:26 Ary ireo izay manao ady, dia tokony tsy manome amin'ny sakafo ny vary, na fitaovam-piadiana, na vola, na sambo, fotsiny araka izay sitraky ny Romanina, ary izy, dia manoa ny baiko, raha maka na inona na inona avy aminy.
8:27 Fa toy izany koa, raha ady no hidona amin'ny firenen'ny Jiosy voalohany, ny Romanina no hanampy azy an-tsitrapo, araka ny toe-javatra mamela azy ireo.
8:28 Ary ireo izay manome fanampiana dia tsy ho omena amin'ny vary, na fitaovam-piadiana, na vola, na sambo, fotsiny araka izay sitraky ny Romanina. Ary izy, dia manoa ny baiko tsy misy fitaka.
8:29 Araka izany teny, ny Romanina efa nanao fanekena tamin'ny vahoaka Jiosy.
8:30 Ary, Raha araka ireo teny ireo, iray na hafa fa te-hanampy na inona na inona ny, na haka na inona na inona avy amin'ireo, mba manao araka ny soso-kevitr'i. Ary na inona na inona izy ireo hametraka na hanaisotra, dia ho nankatò.
8:31 Koa, ny amin'ny ratsy izay nataon'i Demetriosa mpanjaka azy ireo, dia efa nanoratra ho any aminy, nanao hoe:, 'Ary nahoana no nitondra zioga mavesatra anareo eo amin'ny namana sy ny mpiara-dia aminy, ny Jiosy?
8:32 Raha, noho izany, dia avy indray amintsika hamelezana anao, dia omeo rariny ho azy ireo, ary te-hiady aminao ambony ranomasina sy an-tanety. ' "
1 Makabeo 9
9:1 Mandritra izany fotoana izany, rehefa ren'i Demetriosa fa Nikanora sy ny tafiny dia lavo an'ady, izy indray Bakidesa sy Alsima napetraka tany Jodia, ary ny tsara tandroky ny antokon'ny miaramila mitondra azy ireo.
9:2 Ary ireo dia nandeha amin'ny lalana izay mitondra any Gilgala, ary nanangana toby tao Mesaloth, izay ao Arbela. Ary izy ireo nonina izany, ka nandringana ny fiainan 'ny olona maro.
9:3 Tamin'ny volana voalohany tamin'ny amby zato sy dimam-polo-taona faharoa, dia napetraka ny tafika akaikin'i Jerosalema.
9:4 Dia niainga izy ka nankany Beria, amin'ny olona roa alina sy mpitaingin-tsoavaly roa arivo.
9:5 Ary Jodasy efa nametraka ny toby in Elasa, ary telo arivo lahy voafantina teo aminy.
9:6 Ary nahita ny vahoaka ny miaramila, fa maro izy ireo, ka tonga raiki-tahotra indrindra. Ary maro no niala ny tenany amin'ny toby, ary nisy sisa ny azy ireo tsy mihoatra noho ny havaloana-jato lahy.
9:7 Ary hitan'i Jodasa fa efa nisoroka ny miaramilany izy ary ny ady nifanety taminy, ary ny fony vaky, satria tsy manam-potoana mba hanangona ary, ka dia tena kivy.
9:8 Ary noho izany, dia hoy izy ireo izay sisa tavela, "Aoka isika hitsangana ka handeha hamely ny fahavalontsika, angamba dia mety ho afaka hiady aminy. "
9:9 Niova hevitra mihitsy anefa izy ireo azy, nanao hoe:: "Tsy ho afaka, fa aoka isika hiezaka hamonjy ny fiainantsika sy hiverina ho any ny rahalahintsika, ary avy eo isika dia hiady aminy. Fa isika fa vitsy. "
9:10 Ary hoy Jodasa:: "Sanatria aminay, hanao izany zavatra izany, mba handositra hiala azy ireo. Fa raha ny fotoana efa akaiky, aoka isika ho faty miaraka amin'ny hatsaran-toetra, ho an'ny rahalahintsika, ary aoka isika tsy ampitondraina heloka ny voninahitra. "
9:11 Ary ny miaramila niala an-toby, ka dia nitsangana hitsena azy. Ary ny mpitaingin-tsoavaly dia nizara roa, ary ny vato-slingers sy ny mpandefa tsipìka nandeha teo alohan'ny miaramila, ary ny voalohany dia lehilahy mahery rehetra, za-draharaha amin'ny ady.
9:12 Koa, Bakidesa teo amin'ny ankavanana tandroka, ary ny legiona nanatona eo amin'ny andaniny sy ny ankilany, ary nitsoka ny anjomara.
9:13 Fa ireo kosa izay avy any amin'ny lafiny Jodasy, izany koa ankehitriny, niantso, ary nihorohoro ny tany noho ny firohondrohon'ny ny tafika. Ary dia raikitra ny ady hatramin'ny maraina, na dia mandra-paharivan'ny andro.
9:14 Ary hitan'i Jodasa fa ny matanjaka ampahany ny miaramilan'ny Bakidesa dia teo amin'ny ilany ankavanana, ary ny miovaova am-po ary niangona teo aminy.
9:15 Ary ny marina dia nanorotoro ny ampahany aminy, ary nanenjika azy hatrany an-tendrombohitra Azota.
9:16 Ary ireo izay nanaraka ny sisa tandroka nahita fa tsara ilay tandrony nanorotoro, ary toy izany koa dia nanaraka Jodasy, sy ireo izay niaraka taminy, amin'ny ny indray.
9:17 Ary ny ady mafy niady, ary nahafatesana maro ny naratra avy amin'ny andaniny sy ny hafa.
9:18 Ary Jodasy dia voafafy teny, ary ny olon-kafa nandositra.
9:19 Ary Jonatana sy Simona nitondra Jodasy, ny rahalahiny, dia nalevina tao amin'ny fasan-razany, tao an-tanànan'i Modìna.
9:20 Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Isiraely nisaona azy tamin'ny fisaonana lehibe, dia nisaona azy nandritra ny andro maro.
9:21 Ary hoy izy ireo:, "Toy izany dia efa lavo ny olona mahery, izay nanatanteraka ny famonjena ny olona Isiraely!"
9:22 Fa ny sisa amin'ny teny, momba ny ady Jodasy, ary ny tsara asa nataony, ary ny maridrefy, tsy voasoratra. Fa izy ireo dia maro indrindra.
9:23 Ary nony fa, rehefa maty Jodasy, ny iniquitous nanomboka niseho ao amin'ny faritra rehetra amin'ny Isiraely, ary nanomboka mampahery ireo rehetra izay niara-niasa heloka.
9:24 Ary tamin'izany andro izany, nisy nitranga lehibe dia lehibe ny mosary, sy ny faritra manontolo eo an nanolotra ny tenany Bakidesa.
9:25 Ary Bakidesa nifidy lehilahy ratsy fanahy, ary izy nanendry azy ho mpanapaka ny faritra.
9:26 Ary dia nitady ka nanenjika ny namana Jodasy, dia nitondra azy ho any Bakidesa, ary dia naka hamaly azy ireo ka nanao ditra azy.
9:27 Ary nisy fahoriana lehibe nitranga iray teo amin'ny Israely, toy ny mbola tsy nisy, hatramin'ny andro fa tsy nisy mpaminany hita ao amin'ny Isiraely.
9:28 Ary ny namana Jodasy nivory, Ary hoy koa izy tamin'i Jonathan:
9:29 "Koa satria ny rahalahinao Jodasy no lavo, tsy misy olona tahaka azy mba handeha hamely ny fahavalontsika, an'i Bakidesa sy ireo izay ny fahavalon'ny ny firenentsika.
9:30 Ary toy izany koa ankehitriny, efa nifidy anao tao amin'ny fitoerany, amin'izany andro izany, mba ho mpanapaka sy komandy mba handresena ny ady. "
9:31 Ary noho izany, tamin'izany fotoana izany, Jonathan nitondra teo Aminy ny mpitarika, ary dia nitsangana teo amin'ny fitoerana Jodasy, rahalahiny.
9:32 Ary Bakidesa nahalala izany, ka nitady hamono azy.
9:33 Ary Jonatana sy ny rahalahiny Simona nahafantatra izany, ary toy izany koa izay rehetra nomba azy. Ary nandositra nankany an-efitra ny Tekoa, ary nonina noho ny rano ny farihy Asphar.
9:34 Ary Bakidesa nahalala izany, ary amin'ny andro Sabata, izy tenany tonga, sy ny miaramilany rehetra, ampitan'i Jordana.
9:35 Ary Jonatana naniraka ny rahalahiny, ny komandy ny olona, mba hangataka ny Nabateans, ny namany, mba hampisambotra azy ireo ny fitaovana, izay be.
9:36 Ary ny taranak'i Jambri, dia nivoaka avy Medeba, ary nahafaka John, ary izay rehetra nananany, ary dia nandeha an fananany ireo.
9:37 Rehefa afaka izany fisehoan-javatra, dia nisy nilaza tamin'i Jonatasa sy Simona rahalahiny fa ny taranak'i Jambri dia manana fanambadiana lehibe fankalazana, ary izy ireo dia nitarika ny ampakarina, ny zanakavavin'i iray amin'ireo mpitarika lehibe Kanana, avy any Medeba be fanfare.
9:38 Dia nahatsiaro ny ran'ny John, ny rahalahiny. Ary izy ireo nandeha ka nanafina ny tenany eo ambany ny rakotra fanaovam-panavotana 'ny tendrombohitra.
9:39 Ary nanopy ny masony ka nahita. Ary indro, ny tabataba sy ny efa nomaniny tsara vahoaka. Ary ny mpampakatra i, miaraka amin'ny namany sy ny rahalahiny, mba hitsena azy amin'ny ampongatapaka, ary ny zavamaneno, ary maro ny fitaovam-piadiana.
9:40 Dia nitsangana hamely azy amin'ny otrika, dia namono azy ireo, ary nahafatesana maro ny naratra, ary ny sisa nandositra tany an-tendrombohitra, Ary nalainy avokoa ny babo.
9:41 Ary ny fanambadiana fankalazana zary fisaonana, ary ny feon'ny ny zavamaneno ho hira fahalahelovana.
9:42 Ary nony niara-hamaly faty noho ny ran 'ny rahalahiny, ary dia niverina ho eny amoron'ny Jordana.
9:43 Ary nandre momba izany Bakidesa, ary tonga tamin'ny andro Sabata ny lalana rehetra ho any amin'ny fari-tanin'ny Jordana, miaraka amin'ny hery lehibe.
9:44 Ary hoy Jonatana tamin'ny manokana: "Aoka ary isika hitsangana ka hiady ny fahavalontsika. Fa tsy amin'izao fotoana izao, toy ny tamin'ny omaly, na ny andro alohan'ny.
9:45 Fa, indro, ny ady dia eo anoloantsika, ary tena, amin'ny rano Jordana etsy sy eroa, ary ny banky, ary ny heniheny, ary ny ala: tsy misy toerana ho antsika ny hiala.
9:46 Noho izany, Mitaraina ankehitriny ny any an-danitra mba ho afaka amin'ny tanan'ny fahavalonareo. "Dia tafakambana amin'ny ady.
9:47 Ary Jonatana nanolotra ny tanany mba hamely Bakidesa, fa niala teo aminy amin'ny fisintahana.
9:48 ary Jonatana, sy ireo izay niaraka taminy, niantsambotsambotra ralehilahy nandroso ho any Jordana, ary dia nilomano niampita ny Reniranon'i Jordana ho azy ireo.
9:49 Dia nahazo avy ny lafiny Bakidesa tamin'izany andro izany ny iray alina. Ary izy ireo niverina tany Jerosalema.
9:50 Ary nanao tanàna mimanda tany Jodia: ny fanamafisana izay tao Jeriko, ary tany Emaosy, ary tany Beti-horona, ary tao Betela, ary Timna, ary Pharathon, ary Tephon, manda avo, ary ny vavahady, mihidy.
9:51 Ary nametraka miaramila tany aminy, ka dia izay amin'ny Isiraely nanjary nampianarina ady.
9:52 Ary nanamafy ny tanàna any Beti-zora, ary ny Gazara, sy ao amin'ny fiarovana, ary dia nametraka vondrona fanampiny ao aminy, amin'ny fanampiana ny sakafo.
9:53 Dia naka ny zanaky ny mpitondra ao amin'ny faritra ho an'ny takalon'aina, ka nataony tao amin'ny batery fiarovana tany Jerosalema teo ambany mpiambina.
9:54 Ary tamin'ny volana faharoa ny iray dimam-polo amby zato taona fahatelo-, Alsima nandidy fa ny rindrin'ny kianja anatiny ao amin'ny fitoerana masina ho ringana, ary ny asan 'ny mpaminany ho ringana. Ary izy vao handringana azy ireo.
9:55 Tamin'izany fotoana izany, Alsima dia namely, ary ny asany dia voasakana, Ary ny vavany dia mihidy voarindrina, ary dia malemy amin'ny nalemy, ka dia tsy afaka miteny intsony ny teny, na mba hanome baiko ny taranany.
9:56 Ary maty Alsima tamin'izany andro izany, in lehibe fijaliana.
9:57 Ary Bakidesa hitany fa Alsima maty. Dia niverina ho any amin'ny mpanjaka. Ary nandry fahizay ny tany nandritra ny roa taona.
9:58 Ary ny iniquitous raisina miaraka, nanao hoe:, "Indro, Jonathan, sy ny momba azy, miaina amin'ny quietude sy ny fahatokiana. Ankehitriny, noho izany, aoka isika hamoaka Bakidesa, dia azony avokoa izy rehetra, ao anatin'ny iray alina. "
9:59 Dia nandeha izy ireo ka nanome saina azy.
9:60 Ary nitsangana, mba hampandrosoana mbamin'ny miaramila betsaka. Ary mangingina nampitondra taratasy ho any ny namany izay tany Jodia, mba hisambotra Jonathan sy ireo izay niaraka taminy. Fa izy kosa no tsy afaka, noho ny drafitra nahalalan'izy ireo azy.
9:61 Ary nosamboriny, avy ny mponina tao amin'ny faritra, ireo izay ny mpitarika ity lolompo, dimam-polo lahy. Ary izy namono azy.
9:62 ary Jonatana, ary Simon, sy ireo izay niaraka taminy, lasa nankany Bethbasi, izay any an-efitra. Ary nanorina indray ny banga, ary nohamafisiny io tanàna io.
9:63 Ary Bakidesa nahalala izany, Ary namory ny vahoakany maro be rehetra. Dia nilaza izany ho an 'ireo izay avy tany Jodia.
9:64 Dia avy izy ka nanao toby ambony Bethbasi, ary izy namely azy ho maro andro, Ary nanao milina ny ady.
9:65 Fa Jonatana namela ny rahalahiny Simona tao an-tanàna, ary lasa nivoaka nankany an-tsaha, ary dia nanatona tamin'ny maro ny olona,
9:66 ary izy namely Odomera sy ny rahalahiny, Ary ny zanakalahin'i Phasiron, tany an-dainy. Ary izy vao hamono sy ny hampitombo ny hery.
9:67 Raha ny marina, Simon, sy ireo izay niaraka taminy, dia nivoaka avy tao an-tanàna sy nandoro ny milina ny ady,
9:68 izy, dia niady Bakidesa, ka dia nanorotoro ny azy ireo. Ary nampahoriany azy indrindra, noho ny toroheviny sy ny fivoriana teo amin'ny zava-poana.
9:69 Ary dia tezitra ny olona ratsy, izay efa nanome azy torohevitra ho avy ho ao an-faritra, ary izy namono maro tamin'izy ireo. Fa nanapa-kevitra ny hiala ny sisa ho eo amin'ny fireneny.
9:70 Ary fantatr'i Jonatana izany, ary Neko naniraka olona ho aminy mba handamina ny mpiara-manompo, sy hampody ny babo ho azy.
9:71 Ary nanaiky izany an-tsitrapo, ary nanao araka ny teniny, ary dia nianiana izy fa hanao azy tsy ratsy amin'ny andro rehetra niainany.
9:72 Ary naveriny taminy ny sambo-belona izay efa nomena teo aloha avy any amin'ny tanin'ny Joda,. Ary nitodika izy ka lasa ho any amin'ny taniny, Ary tsy nanatona, mba hiditra ao amin'ny taniny.
9:73 Ary toy izany koa ny sabatra dia nitsahatra avy any Israely. Ary Jonatana nonina tany Mikmasy, ary, amin'izany toerana, Jonathan nanomboka hitsara ny olona, Ary nandringana ny ratsy fanahy tsy ho amin'ny Isiraely.
1 Makabeo 10
10:1 Ary tamin 'ny anankiray amby zato taona sixtieth, Alexander, ny zanak'i Antiokosa, izay atao hoe koa ny malaza, niakatra ka nibodo Ptolemaisy, ka dia nandray Azy, ary nanjaka tao.
10:2 Nony ren'i Demetriosa mpanjaka izany, Ary namory tafika lehibe izaitsizy tokoa, ary dia nivoaka hitsena azy amin'ny ady.
10:3 Ary Demetriosa nandefa taratasy ho an'i Jonathan, amin'ny teny am-pilaminana, mba hankalaza azy.
10:4 Fa hoy izy:, "Aoka isika aloha hanao fihavanana aminy, dieny tsy mbola mahatonga ny anankiray amin'ny Alexander hanohitra antsika.
10:5 Fa hotsarovany ny ratsy rehetra izay efa nataony taminy, sy ny rahalahiny, ary ny firenena. "
10:6 Ka dia nomeny azy ny fahefana mba hanangona miaramila, ary ny mamorona teti-fitaovam-piadiana, ka dia izy no ho ny mpiara-miasa. Ary olona natao antoka, izay tao amin'ny batery fiarovana, dia nanome baiko mba hanolorana azy.
10:7 Ary tonga tany Jerosalema Jonatasa, dia novakiny ny taratasy teo anatrehan'ny vahoaka rehetra sy ny olona izay tao amin'ny batery fiarovana.
10:8 Ary izy ireo namely tamin'ny tahotra lehibe, satria reny fa ny mpanjaka nanome azy ny fahefana mba hanangona miaramila.
10:9 Ary ny takalon'aina dia natolotra an'i Jonathan, Ary nampody azy ireo ny ray aman-dreniny.
10:10 Ary Jonatana nonina tany Jerosalema, ary nanomboka nanorina indray sy hanamboatra ny tanàna.
10:11 Ary nilaza izay manao ny asa mba hanangana ny rindrina, ary any an-tendrombohitra Ziona, ny manodidina rehetra, amin'ny vato efamira, toy ny fanamafisana. Dia nataon'ny olona izany.
10:12 Ary ny hafa firenena, izay tao an-mimanda izay efa nanorina Bakidesa, nandositra.
10:13 Ary samy nandao ny fonenany ka lasa nody any amin'ny taniny.
10:14 Ihany any Beti-zora sisa no misy olon-kafa ny sasany amin'ireo, izay efa nahafoy ny lalàna sy ny fitsipika 'Andriamanitra. Ary noho izany dia ho fialofana ho azy ireo.
10:15 Ary Aleksandra mpanjaka nahare ny fampanantenana izay Demetriosa nampanantenaina an'i Jonathan. Ary Nilaza ny ady ho azy, ary ny tsara ataony fa izy sy ny rahalahiny nanao, ary ny zava-tsarotra izay efa niaritra.
10:16 Ary hoy izy:: "Moa ve isika mahita iray hafa toy izany ve ny olona? Ary toy izany koa ankehitriny, dia aoka isika hanao azy ho namana sy ny mpiara-miasa. "
10:17 Ary noho izany, dia nanoratra taratasy, ary nampitondrainy ho any aminy, araka izany teny izany, nanao hoe::
10:18 "Mpanjaka Alexander ny rahalahiny, Jonathan: fiarahabana.
10:19 Efa renay ny aminareo, fa ianao dia olona ny hery sy tanjaka, ary ianao dia mendrika ny ho namantsika.
10:20 Ary toy izany koa ankehitriny, amin'izany andro izany, no manendry izay ho mpisorona avo ny olona, ary ianao hatao hoe sakaizan'ny mpanjaka, (ary dia nirahiny ny lamba volomparasy, ary misy satro-boninahitra volamena,) ary mba miraisa saina aminay eo amin'ny raharaha, ary izay mitandrina fihavanany aminay. "
10:21 Ary Jonatana Nitafy ny masina vestment, amin'ny volana fahafito, ao amin'ny sixtieth amby zato taona, amin'ny fotoam-pivavahana amin'ny fetin'ny Tabernakla. Ary namory miaramila, sady efa nanao be dia be ny fitaovam-piadiana.
10:22 Ary Demetriosa nandre izany teny izany, ary dia feno alahelo fatratra tokoa, ka hoy Izy::
10:23 "Inona izao nataontsika amin'ity, fa Alexander efa nialoha antsika mba hahazo ny fihavanana tamin'ny Jody, hanamafisany ny fahefany?
10:24 Izaho koa dia hanoratra ho azy ireo teny amin'ny fanangonan-tsonia, dia manatera toerana ny laharana sy ny fanomezam-pahasoavana, mba hanao zavatra eo amin'ny fanampiana ahy. "
10:25 Ary nanoratra taratasy ho azy ireo teny ireo: "Demetriosa mpanjaka miarahaba ny firenena Jody: fiarahabana.
10:26 Satria efa nitandrina ny fihavanana aminay, ary ho nitoetra tao amin'ny mpinamana, ary tsy nanao fifanarahana tamin'ny fahavalonay, efa renay izany, ary isika no faly.
10:27 Ary toy izany koa ankehitriny, mbola haharitra tsy hivadika amintsika, ary hamaly soa anareo noho ny zava-tsoa izay nataonao ho anay.
10:28 Ary dia hamaly anao noho ny fandaniana maro, dia homenay anareo fanomezam-pahasoavana.
10:29 Ary ankehitriny, Halefako ianao, sy ny Jiosy rehetra, amin'ny fanomezam-boninahitra, ary manome anareo ny fandoavam-bola ny sira, ary alefaso ny satro-boninahitra sy ny ampahatelon'ireo ny voa.
10:30 Ary ny antsasaky anjara ny vokatry avy amin'ny hazo, izay no anjarako, I hamoy aminareo hatramin'izao andro anio izao sy rahatrizay, ka dia tsy nalaina avy tany amin'ny tany Joda, na avy amin'ny tanàna telo izay efa nanampy ho azy io avy tany Samaria sy Galilia, hatramin'izao andro anio izao sy ho an'ny andro rehetra.
10:31 Ary aoka Jerosalema ho masina sady afaka ao anatin'ny fari-taniny, ary aoka ny fahafolon-karena sy ny fanomezam-boninahitra ho an'ny tenany.
10:32 Ary mihitsy aza aho miverina fahefana amin'ny batery fiarovana, izay ao Jerosalema, ary efa nomeko ho amin'ny mpisoronabe, mba hanendry ao ve raha toy izany ny olona araka izay hofidiny, iza no hiambina azy.
10:33 Ary ny olona rehetra ny Jiosy izay babo avy tany amin'ny tany Joda eran'ny fanjakako, Nalefanareo handeha aho maimaim-poana, Izy mba nafahana rehetra avy amin'ny fanomezam-boninahitra, na dia ny biby fiompy.
10:34 Ary ny andro rehetra ny fotoam-pivavahana, ary ny Sabata, ary ny voaloham-bolana, ary ny Namoaka didy andro, ary ny telo andro talohan'ny fotoam-pivavahana, ary telo andro aorian'ny fotoam-pivavahana, rehetra dia samy hahazo andro tsimatimanota sy ny famelana ho an'ny rehetra ny Jiosy izay amin'ny fanjakako.
10:35 Ary tsy misy dia hanana ny fahefana hanao na inona na inona ho, na mba handrisika izay manao hevi-dratsy, mandika ny anankiray amin'ireny, amin'ny toe-javatra rehetra.
10:36 Ary aoka hisy nisoratra anarana avy amin'ny Jiosy, any an-tafika ny mpanjaka, hatramin'ny telo arivo lahy. Ary ny fanampiana homena ho azy ireo, toy izay noho ny mpanjaka rehetra ny miaramila. Ary ny sasany dia voatendry ho ao amin'ny trano fiarovany ny mpanjaka lehibe.
10:37 Ary ny sasany dia ho tonian'ny raharaha amin'ny fanjakana, ireo izay mandray andraikitra amim-pinoana, ary aoka ny mpitarika azy ireo ho amin'ny, ary aoka izy ireo handeha araka ny lalàna, tahaka ny mpanjaka efa nanome tany amin'ny tany Joda.
10:38 Ary ny tanàna telo izay efa nanampy ho Jodia avy any amin'ny faritr'i Samaria, aoka isaina amin'ny Jodia, mba ho tafaray toy ny, ary toy izany koa mba hanarahany tsy misy fahefana hafa, afa-tsy ny mpisoronabe.
10:39 Ptolemaisy sy ny voatsapa, Homeko ho toy ny fanomezana maimaim-poana ho an'ny toerana masina izay ao Jerosalema, fa ny ilaina lany ny zava-masina.
10:40 Ary omeko, isan-taona, ho dimy arivo sekely volafotsy avy tamin'ny anjaran'ny mpanjaka, avy amin'izay an'ny ahy.
10:41 Ary izay rehetra efa sisa, izay ireo izay ho tonian'ny raharaha amin'ny taona taloha tsy nandoa: hatramin 'izao fotoana, izy ireo no hanome azy ho amin'ny asan'ny ny trano.
10:42 Ary mihoatra noho izany, izy ireo dia handray dimy arivo sekely volafotsy avy ny tanimbary ny amin'ny fitoerana masina isan-taona, ary izany dia ho an'ny mpisorona izay manatanteraka ny asa fanompoana.
10:43 Ary na iza na iza no handositra ao amin'ny tempoly izay any Jerosalema, na any amin'ny faritra, satria mendrika eo anatrehan'ny mpanjaka tamin'izay raharahany, aoka ho afaka, sy izay rehetra azy amin'ny fanjakako, aoka hanana azy io maimaim-poana.
10:44 Ary raha ny asan'ny naorina indray sy ny fanamboarana ny fitoerana masina, ny lany dia mahazo teny avy amin'ny mpanjaka vola azo.
10:45 Ary ny amin'ny fananganana ny mandan'i Jerosalema sy ny manda manodidina azy, ny lany dia mahazo teny avy amin'ny mpanjaka vola azo, tahaka koa ny fananganana ny mandan'i Jodea. "
10:46 Ary rehefa Jonatana sy ny olona nandre izany teny izany, dia tsy nino na sitrako izany, satria nahatsiaro ny lolompo lehibe rehetra izay efa nataony teo amin'ny Isiraely, fa efa naharaiki-tahotra azy fatratra.
10:47 Ary toy izany koa izy ireo sitraky tamin'i Alexander, satria efa ho azy ireo ny mpitarika, nitondra teny fihavanana, ary izy ireo ny fanampiana ho azy isan'andro.
10:48 Ary toy izany koa Aleksandra mpanjaka namory tafika lehibe, ka dia nanome saina ny toby hamely an'i Demetriosa.
10:49 Ary ny mpanjaka roa tafakambana amin'ny ady, ary ny tafik'i Demetriosa nandositra, sy Aleksandro nanaraka azy, Ary rehefa nahorony in azy.
10:50 Ary ny ady mafy niady, mandra-dia nilentika ny masoandro. Ary Demetriosa novonoina tamin'izany andro izany.
10:51 Ary nandefa iraka ho any Aleksandra Ptolémée, ny mpanjakan'i Egypta, araka izany teny izany, nanao hoe::
10:52 "Aoka ho fantatrareo fa efa niverina ny fanjakako, ary izaho mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny razako, ary efa nahazo ny mpitarika, ary efa torotoro Demetriosa, Ary efa nalaiko ny fizakana ny tanintsika,
10:53 ary efa nilahatra hiady aminy, ary dia izy sy ny tobiny efa nanorotoro anay, ary izahay dia mipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakany.
10:54 Ary ankehitriny, Aoka isika hametraka ny namany iray hafa. Ka omeo ahy ny zanakao vavy ho vadiny, ary Izaho ho zanakao-in-lalàna, fa Izaho no hanome fanomezam-pahasoavana izay mendrika ny aminareo, ho roa ianao sy ny. "
10:55 Ary ny mpanjaka namaly tamin'ny hoe Ptolémée: "Sambatra ny andro izay dia niverina ho any amin'ny tanin'ny razanao, ary nipetraka eo amin'ny seza fiandrianan'ny fanjakany.
10:56 Ary ankehitriny, Dia hataoko ho anareo araka ny voasoratra. Fa hihaona tamiko tany Ptolemaisy, ka mba ho hitantsika ny hafa, ary toy izany koa aho mba nanambady azy ho anao, araka izay efa nolazainareo. "
10:57 Ary dia niala avy tany Ejipta Ptolémée, dia izy sy ny zanany vavy Cleopatra, ary dia tonga tao Ptolemaisa any amin'ny iray amby enim-polo amby zato taona faharoa.
10:58 Ary nitsena azy Aleksandra mpanjaka, ka dia nomeny azy Cleopatra, ny vavy. Ary nankalaza ny fanambadiany tao Ptolemaisa tamin'ny voninahitra lehibe, toy ny fihaingoany hifanentana amin'ny mpanjaka.
10:59 Ary Aleksandra mpanjaka nanoratra ho Jonathan, dia ho avy hitsena azy.
10:60 Ary dia nandeha Izy mbamin'ny voninahitra an'i Ptolemaisa, ary nihaona tamin'ireo mpanjaka roa lahy tao, ka dia nomeny azy volafotsy be, ary ny volamena, ary ny fanomezam-pahasoavana. Ary izy nahita fitia eo imasony.
10:61 Ary ny sasany tamin'ny olon-dratsy amin'ny Isiraely, lehilahy ratsy, niangona azy, manapa amin'ny fanoherana azy. Ary ny mpanjaka dia tsy nanatrika azy.
10:62 Ary nanome baiko fa ny fitafiana Jonathan halaina aminy, ary, raha tonga niakanjo volomparasy. Dia nataon'ny olona izany. Ary ny mpanjaka nanao fandaharana ho Azy eo aminy.
10:63 Ary hoy izy tamin'ny mpanapaka, "Hiala hiaraka aminy ho any an-afovoan'ny tanàna, ary manao fanambarana, mba tsy hisy mba hanangana fanoherana hamely azy tamin'izay raharahany, ary mba tsy hisy hanelingelina azy na inona na inona antony. "
10:64 Ary dia toy izany no nitranga fa, raha ny mpiampanga nahita ny voninahiny rehefa nanambara, ary izy niakanjo volomparasy, izy rehetra nandositra.
10:65 Ary ny mpanjaka nanandratra azy, dia nisoratra anarana azy eo anivon 'ny lehibe indrindra namany, ka dia nomeny azy ny toerana toy ny governora sy toy ny mpandray anjara ao amin'ny fanjakany.
10:66 Jonatasa niverina ho any Jerosalema tamin'ny fiadanana sy fifaliana.
10:67 Tamin'ny amby zato taona fahadimy amby enim-polo, Demetriosa, ny zanak'i Demetriosa, tonga avy any Kreta ho any amin'ny tanin'ny razany.
10:68 Ary Aleksandra mpanjaka nandre izany, ary dia nalahelo loatra, ary niverina ho any Antiokia.
10:69 Ary nanendry Demetriosa mpanjaka Apolloniosa ho ankapobeny, izay miandraikitra ny Coelesyria. Ary namory tafika lehibe, dia nanatona an'i Jamnia. Dia naniraka tany amin'i Jonatasa, ny mpisoronabe,
10:70 nanao hoe:: "Ianao irery ihany no manohitra antsika, ary izany no nitondra fa fanesoana sy fahafaham-baraka, satria mampiasa ny fahefana antsika tao an-tendrombohitra.
10:71 Ankehitriny, noho izany, raha matoky ny miaramila, midina ho anay teo Arbota, ary aoka isika fifaninanana iray hafa. Fa ny herin 'ny ady no miaraka amiko.
10:72 manontania, ary mianatra hoe iza moa aho, ary ny olon-kafa, izay vondrona fanampiny ho ahy, izay milaza koa fa ny tongotrao tsy mahajanona eo anoloan'ny ny tavany, Fa ny razanareo efa indroa no nampandositra ao amin'ny taniny.
10:73 Ary ankehitriny, ahoana no ho afaka hanohitra ny mpitaingin-tsoavaly, Ary lehibe ny miaramila amin'ny tani-hay, izay tsy misy vato, na vatolampy, na mametraka ny handositra?"
10:74 Fa raha nandre ny tenin'i Jonatana Apolloniosa, dia nifindra tao ny fanahiny. Dia nifidy lehilahy iray alina, ary dia niala avy tany Jerosalema, ary Simon, rahalahiny, nifanena taminy mba hanampy azy.
10:75 Dia napetraka ny lainy akaikin'i Jopa, fa voahilika azy avy tao an-tanàna, fa tao ny miaramilan'i Apolloniosa avy tany Jopa. Ary noho izany, dia namely azy.
10:76 Ary izay tao an-tanàna, ho tora-kovitra, nisokatra taminy. Ary toy izany koa Jonatana nahazo Jopa.
10:77 Ary nandre izany Apolloniosa, ka dia nanome saina mpitaingin-tsoavaly telo arivo, ary ny miaramila maro.
10:78 Dia nandroso ho any Azota, tahaka ny anankiray manao dia lavitra, fa tampoka niala an-tani-hay, satria maro ny mpitaingin-tsoavaly, ary natoky izy ireo. Ary Jonatana nanaraka azy ho any Azota, ka nilahatra miara-ady.
10:79 Ary Apollonius tavela mangingina azy tany an-toby mpitaingin-tsoavaly arivo.
10:80 Ary Jonatana fantany fa nisy otrika teo ivohony, ary nanodidina ny toby, ary dia natsipy zana-tsipika teo ny olona hatramin'ny maraina ka mandra-paharivan'ny andro.
10:81 Fa ny olona nijanona teo ka mafy, araka izay efa nampianatra azy ireo Jonathan, ary ny soavaliny niaritra zava-tsarotra.
10:82 Ary Simona dia nanatsoaka nivoaka ny tafika, Ary Izy naniraka ireo manohitra ny legiona. Fa ny mpitaingin-tsoavaly no reraka. Ary izy ireo dia nanorotoro ny azy, ary dia nandositra niala.
10:83 Ary izay niely nanerana ny lemaka nandositra nankany Azota, ary dia tonga tany Dagona, amin'izay mba, araka ny sampy amin'izany toerana, mba hamonjy ny tenany.
10:84 Fa Jonatana nandoro Azota sy ny tanàna izay teo manodidina azy, Ary nahafaka ny babo sy ny tempolin'i Dagona. Ary nodorany tamin'ny afo ireo rehetra izay efa nandositra ho ao anatiny.
10:85 Ary dia toy izany fa ireo izay lavon-tsabatra, amin'ireo izay nandoro, dia efa ho valo arivo sy iray alina.
10:86 ary Jonatana, nesorina ny tobiny avy any, Ary naka ny toerana an'i Askalon. Dia nivoaka avy tao an-tanàna hitsena azy amin'ny voninahitra lehibe.
10:87 Jonatasa niverina ho any Jerosalema ny, manana babo maro.
10:88 Ary nony fa, Aleksandra mpanjaka, raha nandre izany teny izany, izy nanampy mbola boninahitra an'i Jonathan.
10:89 Ary dia naniraka azy ny clasp volamena, toy ny mahazatra mba homena izay amin'ny mpanjaka Taranaka. Ka dia nomeny azy Ekrona, ary ny fari-taniny rehetra, ho zara-tany.
1 Makabeo 11
11:1 Ary ny mpanjakan'i Egypta namory tafika, toy ny fasika eny amoron-dranomasina, ary maro ny sambo. Ary nitady hahazo ny fanjakan 'Alexander amin'ny fitaka, ary hitondra azy ho any amin'ny fanjakany.
11:2 Ary dia lasa nankany Syria, nitondra teny fihavanana, ary nanokatra ny tanàna ho azy, ary izy ireo dia nihaona taminy. Fa Aleksandra mpanjaka efa nandidy azy mba handeha hitsena azy, satria ny rainy-in-lalàna.
11:3 Fa raha niditra tao an-tanàna Ptolémée, dia nametrahany miaramila ny miaramila isaky ny tanàna.
11:4 Ary raha nanakaiky an'i Azota, dia nambara taminy fa ny tempolin'i Dagona efa levon'ny afo, ary Azota sy ny tany manodidina azy efa nandrava, ary ny vatana efa nilaozan'ny, ary izay, ho an'ireo izay efa lotika sekely ao amin'ny ady, efa nanao fasana teny an-dalana.
11:5 Ary nisy nanambara amin'ny mpanjaka izay Jonatana nanao izany zavatra izany, mba hanao azy ho halan'ny. Fa ny mpanjaka nijanona mangina.
11:6 Fa Jonatana kosa nankany hitsena ny mpanjaka tao Jopa voninahitra, ary niarahaba ny hafa, ary dia nitoetra tao.
11:7 Fa Jonatana kosa nankany amin'ny mpanjaka ka hatrany amin'ny ony, izay atao hoe Eleotera. Dia niverina nankany Jerosalema.
11:8 Fa mpanjaka Ptolémée nahazo ny fanapahana ny tanàna amoron-tsiraka, hatrany Seleokia, ary niheverany hampididoza drafitra an'i Alexander.
11:9 Ary Neko naniraka olona ho Demetriosa, nanao hoe:: "Avia, aoka isika hanoratra fifanarahana eo amintsika, fa Izaho no hanome anao ny zanako vavy, Alexander izay nanana, ary ianao kosa manjaka ao amin'ny fanjakan'ny-drainao.
11:10 Fa Malahelo aho fa efa nomeko azy ny zanako vavy. Fa efa nitady hahafaty ahy. "
11:11 Ary Nanendrikendrika azy, satria mba naniry ny fanjakany.
11:12 Dia nesoriny ny zanany vavy, ka dia nomeny an'i Demetriosa, dia tafasaraka ny tenany ho afaka Alexander, ary ny fankahalana dia naseho.
11:13 Ary niditra tao Antiokia Ptolémée, ary nampitoeriny roa diadema eo an-dohany, ny an'i Ejipta, ary ny an'i Asia.
11:14 Ary Aleksandra mpanjaka tao Kilikia tamin'izany andro izany, satria ny olona ireo fitoerana mikomy.
11:15 Ary nony nahare izany Aleksandra, dia tonga hamely azy amin'ny ady. Ary ny mpanjaka Ptolémée nitondra ny tafiny, ary izy nifanena taminy tamin'ny tanana mahery, ary dia nataony ho nandositra.
11:16 Ary nandositra ho any Arabia Aleksandra, mba ho voaro ao. Ary ny mpanjaka dia nanandratra Ptolémée.
11:17 Ary Zabdiela Arabo nesorin'i ny lohan'i Alexander, ary nampitondrainy ho any amin'i Ptolemea.
11:18 Ary ny mpanjaka Ptolémée maty tamin'ny andro fahatelo, sy ireo izay ao amin'ny batery fiarovana no rava 'ireo izay teo an-toby.
11:19 Ary Demetriosa no tonga mpanjaka tamin'ny amby zato amby enim-polo taona fahafito.
11:20 Ary tamin'izany andro izany, Jonatana nanangona ireo izay tany Jodia, mba hiady amin'ny batery fiarovana izay tany Jerosalema. Ary izy ireo nanao milina maro ny ady hamelezana azy.
11:21 Ary noho izany, lehilahy sasany avy tany heloka, izay mankahala ny olona, nivoaka ny mpanjaka Demetriosa, ary nilaza taminy fa i Jonatana fahirano ny batery fiarovana.
11:22 Ary nony nandre izany izy, dia tezitra. Ary niaraka tamin'izay dia tonga tany Ptolemaisy, ary nanoratra tamin'i Jonatasa mba tsy fahirano ny batery fiarovana, fa mba hihaona aminy avy hatrany, fa ny fifanakalozan-kevitra.
11:23 Ary rehefa nandre izany Jonathan, dia nandidy azy ireo hanao fahirano azy. Ka nifidy ny sasany avy ny loholon'ny Isiraely sy ny mpisorona, ary dia nataony ny tenany-doza.
11:24 Ary dia naka volamena, ary ny volafotsy, ary ny fitafiana, ary ny maro hafa koa fanomezana, ary dia lasa izy nankany amin'ny mpanjaka tao Ptolemaisy, ary dia nahita fitia teo imasony.
11:25 Ary ny sasany tamin'ny iniquitous avy amin'ny jentilisa nandroso tamin'ny fanoherana azy.
11:26 Ary ny mpanjaka nitondrany azy toy izay teo alohany efa tsaboina azy. Ary nanandratra azy teo imason'ny olona rehetra ny namany.
11:27 Izay naoriny azy ny fiandrianan'ny mpisorona lehibe sy ny hafa rehetra, voninahitra izay natao teo anatrehan'i, izy, ka nanaovany ny mpitarika ny namany.
11:28 Ary Jonatana nangataka tamin'ny mpanjaka mba ho afaka amin'ny hetra Jodea, niaraka tamin'ireo distrika telo, ary Samaria, ary ny voatsapa. Ary nampanantena azy talenta telon-jato.
11:29 Ary ny mpanjaka nanaiky. Ary izy nanoratra taratasy ho Jonathan izany rehetra izany, mbola toy izany:
11:30 "Demetriosa mpanjaka miarahaba an'i Jonatasa rahalahiny, sy ny firenen'ny Jiosy: fiarahabana.
11:31 Nanirahanay anao izahay ny dika mitovy amin'ny taratasy fa nanoratra ho Lasthenes, ny ray aman-dreny, momba anao, ka dia ho fantatrareo.
11:32 'Mpanjaka Demetriosa ho Lasthenes, ny ray aman-dreny: fiarahabana.
11:33 Efa tapa-kevitra ny hanao ny tsara ny vahoakan 'ny Jiosy, izay ny namana sy izay mitandrina ny izay marina aminay, noho ny tsara sitrapo, izay mitana ho antsika.
11:34 Noho izany, efa nanendrena azy ny faritra rehetra Jodia, ary ny tanàna telo, Lyda sy Ramatha, izay nanampy ho Jodia avy any Samaria, ary ny voatsapa, mba ho voatokana ho an'ny rehetra mamono zavatra hatao fanatitra any Jerosalema, amin'ny toeram-izay mpanjaka teo aloha ireo nandray avy isan-taona, ary eo amin'ny toerana ny vokatry ny tany sy ny hazo fihinam-boa.
11:35 Ary, Ary ny sisa amin'ny izay mikasika ho antsika amin'ny fahafolon-karena sy ny fanomezam-boninahitra, hatramin'izao ankehitriny izao dia, amintsika ny hisaorana azy ireo avy amin'ireo, ary koa ny avy any amin'ny faritra paharitry ny sira sy ny satro-boninahitra izay aseho ho antsika.
11:36 ireo rehetra ireo, concede ho azy ireo isika, ary na inona na inona ao ireo na dia ho foanana intsony, hatramin'izao ankehitriny izao sy ho an'ny andro rehetra.
11:37 Ankehitriny, noho izany, ary mitandrema tsara mba hanao ny dika mitovy ireo zavatra ireo, ary dia aoka homena an'i Jonatasa ka napetrany teo an-tendrombohitra masina, eo amin'ny toerana mendri-kaja. ' "
11:38 Ary ny mpanjaka Demetriosa, nony nahita fa ny tany dia nampangina eo imasony sy izay nanohitra azy na inona na inona, naniraka ny miaramila rehetra izy, samy ho any amin'ny fonenany, afa-tsy ny tafika avy any ivelany, izay nanovo miaraka avy any amin'ny moron-firenena. Ary toy izany koa ny miaramila rehetra ny razany dia fahavalo ho azy.
11:39 Ary nisy anankiray, Trifôna, izay aloha amin'ny Alexander ny lafiny. Ary hitany fa ny miaramila rehetra nimonomonona tamin'i Demetriosa, ka dia lasa izy nankany Imalkue ny Arabo, izay nanangana Antiokosa, ny zanak'i Aleksandra.
11:40 Ary nandresy lahatra azy mba hanolotra azy ho azy, ka fa nanjaka ny rainy toerana. Dia nilaza taminy ny zavatra nataon'i Demetriosa, ary ny miaramilany dia fahavalo ho azy. Dia nitoetra teo nandritra ny andro maro.
11:41 Ary Jonatana naniraka tany mpanjaka Demetriosa, ka dia izy no nandroaka ireo izay tao amin'ny batery fiarovana tany Jerosalema sy ireo izay nanaraka ny miaramila, satria niady tamin'ny Isiraely.
11:42 Ary Demetriosa naniraka tany amin'i Jonathan, nanao hoe:: "Izaho dia tsy manao izany ho anao sy ny vahoakanao, fa izaho kosa dia manandratra ny voninahiny sy ny firenena, rehefa fahafahana hanompo.
11:43 Ankehitriny, noho izany, dia tsara raha maniraka olona toy ny mpanampy ahy. Fa ny miaramila rehetra efa lasa niala tamiko. "
11:44 Ary Jonatana naniraka mahery telo arivo lahy izy tany Antiokia. Ary tonga tany amin'ny mpanjaka, ary ny mpanjaka dia tia amin'ny nahatongavany.
11:45 Ary izay avy tao an-tanàna nivory, amby zato sy roa alina ny lehilahy, ary naniry hampihatra ny mpanjaka.
11:46 Ary nandositra ny mpanjaka ho ao an-dapa. Ary izay avy amin'ny tanàna, nibodo ny Misy lalana tao an-tanàna, ary nanomboka niady.
11:47 Ary ny mpanjaka nampaka ny Jiosy ny fanampiana. Dia niangona teo anatrehany izy tamin'izany andro izany, ary avy eo ny tenany izy rehetra niparitaka manerana ny tanàna.
11:48 Dia namono, amin'izany andro izany, iray hetsy, ary nametraka afo any an-tanàna, Ary izy ireo nisambotra babo maro amin'izany andro izany, ary nanafaka ny mpanjaka.
11:49 Ary ireo izay avy tamin'ny tanàna dia nahita fa ny Jiosy efa naka ny tanàna, toy ny te, ka dia nalemy ny tapa-kevitra, dia niantso izy tamin'ny mpanjaka amin'ny fitalahoana, nanao hoe:,
1:50 "Omeo anay ny antoka, ary aoka ny Jody mba hitsahatra tsy assailing aminay sy amin'ny tanàna. "
11:51 Dia nanipy ny fitaovam-piadiana, ary dia nanao fihavanana. Ary ny Jiosy dia nanome voninahitra eo imason'ny mpanjaka sy teo imason'ny rehetra izay tao amin'ny fanjakany. Ary tonga nalaza teo amin'ny fanjakana, ary dia niverina ho any Jerosalema, satria maro ny babo.
11:52 Ary toy izany koa Demetriosa mpanjaka nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianan'ny fanjakany. Ary ny tany dia nampangina eo imasony.
11:53 Ary nampivaona ny zava-drehetra na inona na inona izay rehetra efa nolazainy. Dia tafasaraka ny tenany ho afaka Jonathan, ka tsy sahy hamaly azy araka ny soa izay efa nandray tamin'ny hetra avy aminy. Ary nampahory azy indrindra.
11:54 Ary rehefa afaka izany, Trifôna niverina, ary ny fehiny dia Antiokosa, ny tanora zazalahy, ary nanjaka, ary dia nasiany fehiloha firavaka eo amin'ny tenany.
11:55 Ary nisy nivory teo anatrehany ny miaramila rehetra, izay efa niparitaka Demetriosa, izy, dia niady taminy. Dia nihodina ny indray ka nandositra.
11:56 Ary Trifôna nandray ny elefanta, dia nahazo Antiokia.
11:57 Ary Antiokosa tanora nanoratra ho Jonathan, nanao hoe:: "I hampiorina anareo ao amin'ny fisoronana, koa Izaho dia manendry anao ny tanàna efatra, mba ho eo amin'ny sakaizan'ny mpanjaka. "
11:58 Ary Jesosy nampody azy ho an'ny fanaka volamena ny fanompoany, ary nomeny azy ny fahefana mba hisotro amin'ny volamena, ary mba ho niakanjo volomparasy, ary mba manana volamena clasp.
11:59 Ary notendreny ny Simona rahalahiny ho governora, avy any amin'ny sisin-tanin'i Tyro, rehetra ny lalana mankany amin'ny sisin-tanin'i Ejipta.
11:60 Ary Jonatana nivoaka, dia nandeha namaky ny tanàna manerana ny ony. Ary ny miaramilan 'Syria dia niangona tany fanampiana aminy, ary dia tonga tany Askalon, ary ireo avy any an-tanàna nifanena taminy mendrika.
11:61 Ka dia lasa niala teo ho any Gaza. Ary ireo izay tany Gaza nakatona tena amin'ny. Ary nataony fahirano ny tanàna dia, Ary nandoro izay rehetra tao an-tanàna manodidina, dia nandroba azy.
11:62 Ary ny an'i Gaza nangataka Jonathan, ary nifanekena azy ireo amin'ny tànany ankavanana, Ary nanaiky ny zanany ho antoka ka naniraka azy ireo ho any Jerosalema. Ary izy nandeha namaky ny tany, hatrany Damaskosy.
11:63 Ary Jonatana reny fa ny mpitarika ny Demetriosa no miasa mivadika tao Kadesy, izay any Galilia, mbamin'ny miaramila betsaka, ta hanala azy avy ny raharahan 'ny fanjakana.
11:64 Dia nandroso hitsena azy ireo. Dia navelany ny rahalahiny Simona aoriana any ambanivohitra.
11:65 Ary Simona naka toerana an'i Beti-zora, dia nanafika azy nandritra ny andro maro, Ary rehefa nahorony azy ireo amin'ny.
11:66 Dia nanontany azy ireo mba hanaiky ny antoka, ary nanome izany azy ireo. Ary nandroaka azy niala tamin'ny tao, Ary nosamboriny ilay tanàna, ary nampitoeriny ny miaramila ao anatiny.
11:67 Ary Jonatana sy ny tobiny naka toerana ny rano Genesareta Jesosy, ary, eo anatrehan'ny hazavana voalohany, izy ireo nijoro fiambenana teo Arbota-Hazora.
11:68 Ary indro, miaramila ny vahiny nifanena taminy teo Arbota. Ary napetany teo otrika hamely azy tao an-tendrombohitra. Fa efa nihaona taminy avy any amin'ny lalana mifanohitra.
11:69 Kanefa ireo izay mandainga amin'ny otrika Dia nitsangana niala tamin'ny fitoerany ka nanatevin-daharana azy ireo amin'ny ady.
11:70 Ary ireo rehetra izay teo amin'ny Jonatana ka vaky nandositra, ary tsy ny iray tamin'izy ireo ihany no sisa, afa-tsy Matatiasa, ny zanak'i Absaloma, ary Jodasy, ny zanak'i Chalphi, ny mpitarika ny fiofanana ara-miaramila.
11:71 Ary Jonatana dia nandriatra ny fitafiany, ary nampitoeriny vovoka ny lohany, ary nivavaka.
11:72 Ary Jonatana niverina amin'ny azy ireo tamin'ny ady, ary dia nataony nandositra, dia niady.
11:73 Ary raha ny amin'ny lafiny, izay efa nandositra, nahita izany, dia niverina nankany aminy, ary ny fehiny izy rehetra nanenjika azy, dia tany Kadesy, ny toby, ary izy ireo mihitsy aza efa nihoatra tao.
11:74 Ary nisy latsaka avy tamin'ny hafa firenena tamin'izany andro izany telo arivo lahy. Jonatasa niverina ho any Jerosalema.
1 Makabeo 12
12:1 Ary Jonatana nahita andro izany dia amin'ny lafiny, ka nifidy olona, ary dia naniraka azy hankany Roma, hanamafy sy hanavao ny fihavanana fifanarahana aminy.
12:2 Ary nampitondra taratasy ho any amin'ny Sparsiata, ary ny toerana hafa, araka izany teny.
12:3 Dia lasa nankany Roma ka niditra tao an-trano amin'ny Antenimieran-doholona, ka hoy izy:, "Jonathan, ny mpisoronabe, ary ny firenena 'ny Jiosy, efa naniraka antsika mba hanavao ny fihavanana sy ny fifanarahana, toy ny teo aloha. "
12:4 Dia nomeny taratasy ho azy ireo, ho an'izay ao isaky ny toerana, ka hitarika azy ho any amin'ny tanin'ny Joda amin'ny fiadanana.
12:5 Ary izao ny dika mitovy ny taratasy izay Jonathan nanoratra ho an'ny Sparsiata:
12:6 "Jonathan, ny mpisoronabe, ary ny anti-panahy ny olona, ary ny mpisorona, ary ny sisa ny vahoakan 'ny Jiosy, ho any amin'ny Sparsiata, ny rahalahiny: fiarahabana.
12:7 Ankehitriny, fotoana lasa izay, taratasy dia nampitondrainy ho any Oniasa, ny mpisoronabe avy Arius, izay nanjaka avy eo eo aminareo, mba ho rahalahintsika, toy ny dika mitovy izay voasoratra eto ambany fanjakana.
12:8 Ary Oniasa nandray ny lehilahy izay efa naniraka amim-boninahitra. Ary izy nandray ny taratasy, in izay ampitaina ny fifanarahana sy ny fiadanana fifanarahana.
12:9 izahay, anefa, Tsy mila izany zavatra izany, manana noho ny fampiononana ny boky masina, izay eo am-pelatananay.
12:10 Isika tia ny hampandehaniko hankatỳ aminareo, mba hanavao ny firahalahiana sy ny namany, izahay, fandrao, -kery, Efa vahiny ho anao, Fa be ny fotoana efa lasa hatramin'ny nampitondrainareo ho atỳ aminay.
12:11 Noho izany, dia mahatsiaro anao, amin'ny fotoana rehetra, ka aza mitsahatra, amin'ny fotoam-pivavahana sy ny andro hafa, raha dia tsara, ny fanati fa manolotra, ary amin'ny fankalazana, araka ny mety sy marina mba hahatsiaro ireo rahalahy.
12:12 Ary noho izany, izahay mifaly amin'ny voninahitrao.
12:13 Nefa maro ny fahoriana sy ny ady maro no nanodidina anay, ary ny mpanjaka izay manodidina antsika no niady hamely anay.
12:14 Fa isika tsy vonona ny olana anao, na ny sisa ny mpiara sy ny namany, momba ireo ady.
12:15 Fa manana fanampiana avy any an-danitra, ary efa natolotry, ary ny fahavalonay efa nanetry tena.
12:16 Ary noho izany, efa nifidy Numenius, ny zanak'i Antiokosa, sy Antipatera, ny zanak'i Jason, Ary nirahinay azy ireo ho any amin'ny Romana, mba hanavao ny fifanekem-pihavanana teo aloha sy ny fifanarahana aminy.
12:17 Ary noho izany, efa nandidy azy ireo ihany koa ny avy any aminareo, ary ny miarahaba anareo, ary ny hamonjy ny taratasy ho anao, mikasika ny fanavaozana ny mpirahalahy.
12:18 Ary ankehitriny, ianao, dia tsara ny hamaly ny momba izany zavatra izany. "
12:19 Ary izao ny dika mitovy ny taratasy dia naniraka tany amin'i Oniasa:
12:20 "Arius, mpanjakan'ny Sparsiata, an'i Oniasa, ny mpisorona lehibe: fiarahabana.
12:21 Izany dia hita ao amin'ny soratra masina, momba ny Sparsiata sy ny Jiosy, fa izy ireo rahalahy, ary izy ireo avy amin'ny fianakaviana Abrahama.
12:22 Ary satria mahalala ireo zavatra ireo, ianao dia tsara ny manoratra ny momba ny fiadanana.
12:23 Fa izahay koa dia efa nanoratra ho any aminareo indray fa ny omby aman'ondriny sy ny fananany dia anao, ary izay Anao dia ny antsika. Ary noho izany, efa nandidy fa ireo zavatra ireo dia tokony ho nambara ho anareo. "
12:24 Ary Jonatana dia nahare fa ny mpitarika avy any Demetriosa dia niverina indray tamin'ny tafika lehibe kokoa noho ny teo aloha, mba hiady hanohitra azy.
12:25 Ary noho izany, dia niala avy tany Jerosalema, ary efa nihaona taminy tao amin'ny faritr'i Hamata. Fa tsy nanome azy ireo fotoana hiditra any amin'ny faritra ihany.
12:26 Ary naniraka mpitsikilo ao an-toby, ary, niverina, dia nilaza fa izy ireo nikasa ho avy aminy amin'ny alina.
12:27 Ary nony efa maty ny masoandro, Jonathan nandidy ny olony mba hitsangana fiambenana, ary ho eo amin'ny fitaovam-piadiana, vonona ny hiady, nandritra ny alina manontolo, ary nametraka mpiambina manodidina ny toby.
12:28 Ary ny fahavalony nandre fa Jonatana vonona, amin'ny ny, for ady. Ary izy ireo namely ireo sady natahotra no matahotra ao am-pony. Dia nampirehitra afo tao amin'ny toby.
12:29 fa Jonatana, sy ireo izay niaraka taminy, Tsy nahafantatra momba ny ho tra-maraina. Fa nahita ny jiro mirehitra.
12:30 Ary Jonatana nanenjika azy ireo, nefa tsy nahatratra azy. Fa efa tafita ny ony Eleotera.
12:31 Ary Jonatana navily nankany amin'ny Arabo, izay atao hoe Zabadeans. Dia namely azy sy nitondra ny babo.
12:32 Dia regrouped dia tonga tany Damaskosy, dia nandeha namaky ilay faritra.
12:33 Fa Simona nivoaka ka tonga hatrany Askalon, ary ny teo akaiky teo trano mimanda, fa nivily hankany Jopa, ka nonina azy,
12:34 (satria efa reny fa nikasa ny tànany eo ambonin'ny tanàna mimanda, izay teny amin'ny lafiny Demetriosa) ary nametraka ny mpiambina teo, hiandry ny.
12:35 Ary Jonatana niverina, Ary novorina ny loholon'ny vahoaka, ary dia nanapa-kevitra niaraka azy Haorina mimanda tany Jodia,
12:36 ary mba hanangana ny mandan'i Jerosalema, ary mba hanangana ny haavony lehibe eo amin'ny batery fiarovana sy ny tanàna, mba hampisaraka azy amin'ny an-tanàna, ka hahatonga azy io mijoro irery ary tiany tsy mividy, na fivarotana any.
12:37 Dia Nisy mpiasa voavory hanao ny tanàna. Ary nisy ampiantany teo nita ny renirano, tandrifin'ny fiposahan'ny masoandro, nisy lavo. Ary nanorina indray izay atao hoe Chaphenatha.
12:38 Ary Simona indray Adida in Sefela, ary nohamafisiny io tanàna io, Ary nanangana vavahady mihidy.
12:39 Ary noho izany, rehefa Trifôna efa nanapa-kevitra ny hanjaka Asia, ary mba mieritreritra ny diadema, ary ny hanitatra ny tànany hamely mpanjaka Antiokosa,
12:40 dia natahotra, fandrao Jonatana mba tsy hamela azy, fa mba hiady taminy. Dia nitady hisambotra azy sy hamono azy. Dia niainga izy ka nankany Beti-sana.
12:41 Ary Jonatana nivoaka hitsena azy amin'ny efatra alina mpiady voafantina, ary dia tonga tany Beti-sana.
12:42 Ary nony hitan'i Trifôna fa tonga Jonatana mbamin'ny miaramila betsaka mba hanitatra ny tànany hamely azy, dia natahotra.
12:43 Ary toy izany koa dia nandray azy tamim-boninahitra, ary nidera azy rehetra ny namany, ka dia nomeny azy fanomezana. Ary izy nandidy ny miaramilany mba hankatò azy, toy ny tenany.
12:44 Ary hoy izy tamin'i Jonatasa: "Nahoana no raiki-tahotra ny olona rehetra, rehefa tsy misy ady eo amintsika?
12:45 Ary ankehitriny, handefa azy ireo hiverina any an-tranony, fa mifidy ho an'ny tenanao ny olom-bitsy, iza no hitoetra ao aminao, ary andeha hiaraka amiko ho any Ptolemaisa, ary hatolotro eo aminareo, ary ny sisa amin'ny fiarovana mafy, ary ny tafika, ary ny rehetra izay miandraikitra ny Filan-kevi-, Dia haveriko, dia lasa mandeha. Fa izao no antony fa tonga Aho. "
12:46 Ary Jonatana nino Azy, ary dia nataony araka izay nolazainy. Ary nony efa nampody ny miaramilany, ka dia lasa nody any amin'ny tanin'ny Joda,.
12:47 Fa nihazona azy telo arivo lahy, izay dia naniraka roa arivo ho any Galilia, ary ny arivo niaraka taminy.
12:48 Fa raha niditra tao Ptolemaisa Jonatasa, ny an'i Ptolemaisa nakatona ny vavahadin'ny tanàna, Ary izy ireo nisambotra azy. Ary ireo rehetra izay niditra niaraka taminy, dia novonoina tamin'ny sabatra.
12:49 Ary Trifôna naniraka miaramila sy mpitaingin-tsoavaly ho any Galilia, sy ho any amin'ny tany lemaka lehibe, mba handringana ny mpiara-miasa rehetra Jonatana.
12:50 Fa, rehefa nieritreritra fa Jonatana efa babo sy novonoina, miaraka amin'ireo rehetra izay niaraka taminy, Nampahery ny hafa izy ireo, ary dia nankany amin'ny voaomana hiady.
12:51 Dia ireo izay nanenjika azy ireo, satria izy ireo hiaro ny ainy, dia hiverina.
12:52 Ary noho izany, izy rehetra dia tonga tany amin'ny tanin'ny Joda amin'ny fiadanana. Ary niteha-tratra Jonathan, ary ireo izay efa nomba an'i Jesosy, indrindra. Ary ny Isiraely dia fitomaniana lehibe nisaona tamin'ny.
12:53 Ary ny firenena rehetra izay teo manodidina azy ireo nitady ny hanorotoro azy ireo. Fa hoy izy ireo::
12:54 "Tsy manana mpitarika na mpanampy. Koa ankehitriny, aoka isika hiady aminy sy manala ny fahatsiarovana azy eo amin'ny zanak'olombelona. "
1 Makabeo 13
13:1 Ary Simona reny fa Tryphon efa namory miaramila be ho avy any amin'ny tanin'ny Joda sy ny hametraka fandaniam-poana azy.
13:2 Nahita fa ny olona matahotra sy mangovitra, dia niakatra tany Jerosalema, ary namory ny olona.
13:3 Ka nananatra azy, hoy izy:: "Fantatrareo ny zavatra ady lehibe I, ary ny rahalahiko, ary ny ankohonan'ny raiko, no niady ho an'ny ny lalàna sy ny fitoerana masina, ary ny fangirifiriana izay efa nahita.
13:4 Vokatr'izany ireo zavatra ireo, rehetra, ry rahalahiko efa maty noho ny amin'i Isiraely, ary izaho irery ihany no sisa.
13:5 Ary ankehitriny, dia tsy ilaina ho ahy ny hitsitsy ny aiko na oviana na oviana ny fahoriana. Fa izaho no tsy tsara noho ny rahalahiko.
13:6 Ary noho izany, Dia rariny ny olona sy ny fitoerana masina, ary toy izany koa ny zanany sy ny vadiny. Fa ny jentilisa rehetra miangona mba handringanana antsika, fotsiny avy lolompo. "
13:7 Ary ny Fanahin 'ny olona avy hatrany enkindled, raha nandre izany teny izany.
13:8 Ary izy ireo namaly tamin'ny feo mahery, nanao hoe:: "Ianao no lehibenay, toerana Jodasy sy Jonatana, rahalahinao.
13:9 Hiady ny adintsika, ary hanao na inona na inona milaza antsika hanao. "
13:10 Ary noho izany, novoriny avokoa ny lehilahy mpiady, dia nanafaingana ny fahavitan'ny rehetra ny mandan'i Jerosalema, ary nohamafisiny io tanàna io manodidina.
13:11 Ary Jesosy naniraka an'i Jonathan, ny zanak'i Absaloma, ary niaraka taminy ny tafika vaovao, ho any Jopa, Ary nandroaka ireo izay tao anatiny, ary izy kosa nitoetra teo.
13:12 Ary Trifôna nifindra avy any Ptolemaisa, mbamin'ny miaramila betsaka, ho tonga any amin'ny tany Joda, koa Jonatasa niaraka taminy tany am-ponja.
13:13 Fa Simona naka toerana tao Addus, tandrifin'ny tavan'ny amin'ny tani-hay.
13:14 Ary rehefa tonga saina fa Trifôna Simona nitsangana tao an-toerana ny rahalahiny, Jonathan, ary dia ho nandray anjara amin'ny ady aminy, dia naniraka olona ho any aminy,
13:15 nanao hoe:: "Efa voasambotra ny rahalahinao, Jonathan, noho ny vola izay nitrosa tamin'ny mpanjaka kaonty, noho ny zavatra izay izy no tompon'andraikitra.
13:16 Ary ankehitriny, mandefa ny talenta volafotsy zato, ary roa ny zanany ho takalon'aina, ka, raha voaroaka, mba tsy handositra antsika. Ary avy eo isika dia halefako. "
13:17 Ary Simona fantany fa ny tenany no niteny fitaka ho Azy. Kanefa nandidy ny vola sy ny ankizilahy mba homena, mba tsy mihatra ny tenany ho fanoherana lehibe avy tamin'ny olona Isiraely, izay mety ho nilaza,
13:18 "Izany dia satria tsy nandefa ny vola, ary ny ankizilahy dia maty."
13:19 Dia naniraka ny ankizilahy, ary ny iray talenta zato. Dia nandry teo fa tsy handroaka Jonatana.
13:20 Ary rehefa afaka izany, Trifôna tonga tany amin'ny tany, ny hanorotoro azy. Ary boribory manodidina amin'ny lalana izay mitondra any amin'ny Adora. Ary Simona sy ny tobiny rehetra nandeha an-toerana, na taiza na taiza izy ireo nandeha.
13:21 Fa ireo izay tao amin'ny batery fiarovana naniraka olona tany amin'i Tryphon, mba ho tonga amin'ny alalan'ny faingana ho any an-efitra, ary handefa azy ireo vatsy.
13:22 Ary Trifôna nanomana ny mpitaingin-tsoavaliny rehetra mba tonga tamin'iny alina. Fa be dia be orampanala, ary tsy tonga any Gileada.
13:23 Ary rehefa nanatona an'i Baskama, dia namono an'i Jonatana sy ny zanany tao.
13:24 Ary Trifôna niverina ka nankao an-taniny.
13:25 Ary Simona naniraka naka ny taolan'i Jonatana, rahalahiny, ary dia nandevina azy tao Modìna, ny tanànan-drazany.
13:26 Ary ny Isiraely rehetra niteha-tratra azy be dia fitomaniana. Ary nisaona azy nandritra ny andro maro.
13:27 Ary Simona nanao, ny fasan-drainy sy ny rahalahiny, ny trano, avo ny mahita, ny voalambolambo vato, anoloana ary miverina.
13:28 Ary ny mpanjaka nametraka ny fito piramida, tamin'ny rahalahiny, an-drainy, ary ny reniny, ary ny rahalahiny efatra.
13:29 Ary manodidina ireny zavatra ireny no nametraka andry lehibe; ary teo ambonin'ny andry, fitaovam-piadiana, ho fahatsiarovana mandrakariva; ary afa-tsy ny fitaovam-piadiana, sary sokitra ny sambo, izay mety ho hita rehetra izay sambo ny ranomasina.
13:30 Izany no ilay fasana izay nataony tao Modìna, mandraka androany.
13:31 fa Trifôna, fony izy teo amin'ny dia miaraka amin'ny tanora mpanjaka, Antiokosa, namono azy amin'ny fitaka.
13:32 Ary izy no nanjaka nandimby azy, ary hitafy ny fehiloha firavaka Asia, ary nafahany fanindronana lehibe teo amin'ny tany.
13:33 Ary Simona nanao ny fiarovana ny Jodia, fanamafisana azy amin'ny tilikambo avo, ka mafy ny rindrina, sy vavahady mihidy. Ary nampitoeriny vatsy ao amin'ny trano fiarovany.
13:34 Ary Simona nifidy olona, ary izy naniraka mpanjaka Demetriosa, mba homeny ny famelana ny faritra, ho an'ny rehetra izay nataon'i Trifôna dia ny hanatanteraka mandroba.
13:35 Ary Demetriosa mpanjaka namaly izany teny izany, Ary izy nanoratra taratasy toy izany:
13:36 "Mpanjaka Demetriosa ho any Simon, ny mpisoronabe sy ny namany ny mpanjaka, sy ny anti-panahy, ary ny vahoakan 'ny Jiosy: fiarahabana.
13:37 Ny satro-boninahitra volamena sy ny bahem fa Hianao no naniraka, efa nandray. Ary izahay dia vonona ny hanao fihavanana lehibe aminareo, ary ny manorata any amin'ny mpiandry raharaha avy tamin'ny mpanjaka no avelanareo ho anao ny zavatra izay efa nafahana.
13:38 Fa na inona na inona no nanorina mbola manan-kery ho anareo. Ny fiarovany mafy izay efa nanorina, aoka ho anao.
13:39 Toy izany koa, misy mpiandraikitra na tsiny, mandraka androany, dia mamela azy, miaraka amin'ny satro-boninahitra izay nitrosa. Ary raha ny zavatra hafa no hetra tany Jerosalema, aoka ho tsy hosoratana.
13:40 Ary raha misy aminareo dia mety ho voasoratra eo amin 'ny, aoka izy hilatsaka. Ary aoka hisy fiadanana eo amintsika. "
13:41 Tamin'ny amby zato taona seventieth, ny ziogan'ny ny jentilisa nesorina amin'ny Isiraely.
13:42 Ary ny olona Isiraely, no vao nanoratra ao amin'ny vato fisaka sy ny rakitsoratra-bahoaka, tamin'ny taona voalohany nanjakan'i eo ambany Simon: mpisoronabe, komandy lehibe, sy ny mpitarika ny Jiosy.
13:43 Ary tamin'izany andro izany, Simon naka toerana tao Gaza, ary nitoby manodidina azy, Ary nanao milina ny ady, ary nampihatra azy ireo ho any an-tanàna, ary dia namely ny iray tilikambo ka nahafaka azy.
13:44 Ary izay teo anatin'ny nanapaka ny milina nivoaka ho any an-tanàna. Izy amin'ny fihorakorahana be nitranga tao an-tanàna.
13:45 Ary izay tao an-tanàna niakatra teo ambonin'ny manda, ny vady aman-janany, rehefa rovitra ny akanjo. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery, mangataka Simon mba hanome azy ireo ny antoka.
13:46 Ary hoy izy ireo:, "Aza mamaly antsika araka ny lolompo, fa araka ny famindram-po. "
13:47 ary nitomany, Simon tsy mandringana;. Kanefa dia nariany teny ivelan'ny tanàna, ary nodiovina ny trano, izay nisy sampy. Ary avy eo dia miditra eo amin'ny fihirana, mitso-drano ny Tompo.
13:48 Ary, nony natsipiny avy ao aminy ny fahalotoana rehetra, dia napetrany tao ny olona izay te hitandrina ny lalàna. Ary dia nohamafisiny io tanàna io ary dia nataony ny fonenany.
13:49 Fa ireo izay tao amin'ny batery fiarovana, dia Jerosalema, dia voarara tsy hivoaka ary niditra ny faritra, ary avy nividy sy nivarotra. Dia noana loatra izy ireo, ary maro tamin'izy ireo no maty tamin'ny alalan'ny mosary.
13:50 Ary ny vahoaka niantso an'i Simon, mba handray ny antoka, ary dia nanome azy ho azy ireo. Ary nandroaka azy niala tamin'ny tao, ary nodiovina ny fiarovana avy amin'ny contaminations.
13:51 Ary niditra tao tamin'ny andro fahatelo amby roa-polo tamin'ny volana faharoa, ao amin'ny iray fito-polo amby zato taona voalohany, amin'ny fisaorana, sy ny sampan-drofia, sy ny lokanga, ary ny kipantsona, sy valiha, sy ny fihirana, ary ny tonon-kiran'i, fa lehibe fahavalo efa torotoro eo amin'ny Isiraely izy.
13:52 Ary nanorina fa ireo andro ireo dia tokony hotehirizina isan-taona amim-pifaliana.
13:53 Ary nanamafy ny tendrombohitra misy ny tempoly, izay akaiky amin'ny batery fiarovana, dia nonina tao ny tenany, miaraka amin'ireo izay niaraka taminy.
13:54 Ary Simona, nony nahita fa i Jaona, zanany, dia lehilahy mahery an'ady. Ary toy izany koa izy nanendry azy ho mpitari-tafika rehetra ny miaramila. Ary nonina tany Gazara.
1 Makabeo 14
14:1 Tamin'ny fito-polo amby zato taona faharoa-, Demetriosa mpanjaka namory ny miaramilany, ary dia niditra tao an Media mba hahazoana vondrona fanampiny mba hiady Tryphon.
14:2 ary Arsasa, ny mpanjakan'i Persia sy Media, reny fa Demetriosa niditra ny voatsapa, ary toy izany koa ny iray dia naniraka ny mpanapaka mba hisambotra azy velona ary mba hitondra azy ho any aminy.
14:3 Ary dia nivoaka izy ka namely ny tobin'ny Demetriosa. Ka nahafaka azy ka nitondra azy ho any Arsasa, ary nampitoeriny azy eo ambany mpiambina.
14:4 Ary ny tanin'ny Joda rehetra nandry fahizay nandritra ny andro rehetra Simon, ka nitady izay tsara ho an'ny vahoakany. Sy ny heriny ary ny voninahiny nankasitrahany azy nita ny androny rehetra.
14:5 Ary, amin'ny voninahiny rehetra, dia nanaiky Jopa toy ny seranan-tsambo, ary Izy no nanao azy ny fidirana ho any amin'ny nosin-dranomasina.
14:6 Ary malalaka ny fetra teo amin'ny fireneny, Ary nifehy ny ambanivohitra.
14:7 Ary novoriny babo maro, ary izy no mpanapaka ny Gazara sy Beti-zora, sy ao amin'ny fiarovana. Ary nitondra loto hiala izany, ary tsy nisy olona nahajanona azy.
14:8 Ary samy namboly ny taniny soa aman-tsara, ary ny tanin'ny Joda namokatra ny vokatra, ary ny hazo any an-tsaha ny vokatry.
14:9 Ny anti-panahy rehetra nipetraka teo an-dalambe, ary niresaka ny zavatra tsara ho an'ny firenena, ary ny tanora nitafy lamba ny tenany amin'ny voninahitra sy ny fitafiana ny ady.
14:10 Ary nomeny fanomezam-boninahitra ny vatsy ho an'ny tanàna, ary Namoaka didy fa tsy maintsy fitaovana ho an'ny fanamafisana, ka ny laza ny voninahiny dia nalaza, hatrany amin'ny faran'ny tany.
14:11 Nampandeha mba ho soa aman-tsara ny tany, ary ny Isiraely dia nifaly tamin-karavoana lehibe.
14:12 Ary samy nipetraka teo ambanin'ny voalobony sy ny aviaviny izy eo ambanin'ny. Ary tsy nisy izay ta-hampitahotra azy ireo.
14:13 Ary tsy nisy na inona na inona sisa izay mety hiady aminy eny an-tany; mpanjaka efa torotoro fo tamin'izany andro izany.
14:14 Izay naoriny rehetra ny manetry tena ny vahoakany, ka dia tsy nitady ny lalàna, Dia nesoriny heloka rehetra sy ny ratsy.
14:15 Dia nankalaza ny fitoerana masina, Ary maro ny fanaky ny fitoerana masina.
14:16 Ary dia re tany Roma, ary na dia ao Sparta, fa Jonatana efa lasana. Ary toran-kovitra indrindra izy ireo.
14:17 Fa rehefa reny fa Simon, rahalahiny, efa tonga mpisorona lehibe nandimby azy, ary dia nahazo ny firenena iray manontolo sy ny tanàna rehetra ao aminy,
14:18 dia nanoratra ho azy amin'ny takela-barahina, mba hanavao ny fisakaizana sy ny fifanarahana, izay efa nataony tamin'i Jodasa sy tamin'i Jonatasa, rahalahiny.
14:19 Ary novakina teo imason'ny fiangonana tany Jerosalema. Ary izao ny dika mitovy ny taratasy izay ny Sparsiata naniraka:
14:20 "Ny mpitarika sy ny tanàna any amin'ny tany Sparsiata, ho Simon, ny mpisorona lehibe, sy ny anti-panahy, ary ny mpisorona, ary ny sisa ny vahoakan 'ny Jiosy, ny rahalahiny: fiarahabana.
14:21 Ary ny iraka izay nalefa ho any ny olona nilaza ho anay ny voninahitrao, sy ny voninahitra, ary faly. Ary faly izahay amin'ny nahatongavany.
14:22 Ary nanoratra izay fa hoy ny azy ho amin'ny filan-kevitra ny olona, toy izao manaraka izao: 'Numenius, ny zanak'i Antiokosa, sy Antipatera, ny zanak'i Jason, iraka ny Jiosy, dia tonga taty aminay hanavao ny fihavanany aminay teo aloha.
14:23 Ary sitraky ny olona mba handray ny olona tamim-boninahitra, ary ny mametraka ny dika mitovy ny teny ao amin'ny fizarana ny boky bahoaka, mba ho fahatsiarovana ho an'ny vahoakan 'ny Sparsiata. Koa, dia efa nanoratra ny dika mitovy azy ireo Simon, ny mpisorona lehibe. ' "
14:24 Ary rehefa afaka izany, Simon naniraka Numenius ho any Roma, ao amin'ny zara-tany momba ny ampinga volamena lehibe, milanja mihoatra ny arivo kilao, mba hanamafy ny fiarahana amin'izy ireo.
14:25 Fa raha ny vahoaka Roma efa nandre ireo teny ireo, hoy izy ireo: "Inona no asa ny fisaorana no mamaly Simona sy ny zanany?
14:26 Fa efa voamarina ny rahalahiny, ary efa niady eny ny fahavalon'ny Isiraely azy. "Ary toy izany koa, Namoaka didy izy ireo azy maimaim-poana, ary nanoratra ny anarany tamin'ny takela-barahina, ary nametraka azy io tao amin'ny soratra ao an-tendrombohitra Ziona.
14:27 Ary izao ny dika mitovy ny soratra: "Ary tamin'ny andro fahavalo ambin'ny folo tamin'ny volana ELOLA, ao amin'ny fito-polo amby zato taona faharoa-, ny fahatelo taona eo ambanin'ny Simon, ny mpisorona lehibe tao Asaramel,
14:28 in lehibe fivoriana ny mpisorona, ary ny olona, ary ny mpitondra ny firenena, ary ny anti-panahy ao amin'ny firenena, izany zavatra izany dia nanamarika: 'Ankehitriny dia matetika nisy ady eto amin'ny firenentsika.
14:29 ary Simon, ny zanak'i Matitia, ny avy tamin'ny taranak'i Jariba, sy ny rahalahiny, Nanasatra ny tenany-doza, ary efa nanohitra ny fahavalon'ny ny firenena, mba hanamarina ny toerana masina sy ny lalàna. Ary izy nanome voninahitra ny olona voninahitra lehibe.
14:30 Ary Jonatana nivory ny firenena, ka dia nanao ny mpisorona lehibe, ary nametrahany mba hiala sasatra eo amin'ny fireneny.
14:31 Ary ny fahavalony te-hanitsaka ka nandry lao ny firenena, ary hanitatra ny tanany hamely ny toerana masina.
14:32 Ary Simona nanohitra, ary niady hiaro ny fireneny, ary dia nangataka vola be, ary dia fiadiana ho an'ny lehilahy mahery teo amin'ny fireneny sady nomeny karama.
14:33 Ary voaro mafy ny tanànan'i Jodia sy Beti-zora, izay eny amin'ny sisin-tanin'i Jodia, aiza ny fitaovam-piadiana ny fahavalo teo anoloany. Ary nametraka miaramila ny lehilahy jiosy tao.
14:34 Ary mimanda Jopa, izay ao amoron-dranomasina, ary Gazara, izay eo amin'ny fari-tanin'i Azota, ny fahavalo izay nijanona teo anatrehan'i, ary nampitoeriny Jiosy tao. Dia napetraka aminy izay miendrika ny fanomanana.
14:35 Ary ny olona nahita ny tantaran'i Simon, ary ny voninahitra izay nikasa ny hitondra ny firenena, ary nony azony izy, ny komandy sy ny mpisorona aloha, satria efa nanao izany rehetra izany, ary noho ny rariny sy ny finoana fa foana ny firenena, ary satria nitady natao hanandratra ny fireneny amin'ny fomba rehetra.
14:36 Ary amin'ny androny, nisy fanambinana ataon'ny tànany, ka fa ny jentilisa no hesorina ny taniny, ary koa ireo izay tao an-Tanànan'i Davida, tany Jerosalema, ao amin'ny batery fiarovana, izay lasa nandeha izy ireo ka voaloto ny toerana rehetra izay manodidina ny fitoerana masina, ary avy izay nentiny lehibe kapoka hamely fahadiovam-pitondrantena.
14:37 Ary nampitoeriny tao Jiosy lehilahy, ho fomba fiarovana ny faritra sy ny tanàna, ary nananganany ny mandan'i Jerosalema.
14:38 Ary Demetriosa mpanjaka fa izy no ho mpisorona lehibe.
14:39 Araka izany zavatra izany, nanao azy ny namany, ary dia nankalaza Azy tamin'ny voninahitra lehibe.
14:40 Fa reny fa ny Romanina ny Jiosy niantso ny namany, sy ny mpiara-miasa, sy ny rahalahiny, ary satria nandray ny ambasadaoro Simona voninahitra,
14:41 ary ny Jiosy sy ny mpisorona efa nanaiky fa tokony ho ny governora sy ny mpisorona avo mitsahatra, mandra-tokony hitsangana ho mpaminany tsy nivadika,
14:42 ary mba ho ny mpitarika azy, ary mba hikarakara ny fitoerana masina, ary mba hanendry mpifehy ny asany, ary ny firenena, ary ny fitaovam-piadiana, ary ny tonian'ny ny fiarovana,
14:43 ary mba hikarakara ny toerana masina, ary mba ho nankatò rehetra, ary ny firaketana rehetra ao amin'ny firenena dia tokony ho ao amin 'ny anarany, ary mba ho niakanjo volomparasy sy volamena,
14:44 ary mba tsy ho ara-dalàna noho ny olona rehetra na ny mpisorona mba mahafoana izany zavatra izany na dia iray akory, na ny mifanohitra zavatra izay nanao ny azy, na hiantso miaraka ny fiangonana ao amin'ny firenena raha tsy Izy, na ny hitafy jaky, na hampiasa ny clasp volamena.
14:45 Ary na iza na iza no hanao raha tsy izany, na iza no mahafoana izany zavatra izany na dia iray akory, dia ho meloka.
14:46 Dia sitraky ny olona rehetra mba hanendry Simon, ary hanao araka izany teny izany.
14:47 Ary Simona nanaiky izany, ka dia sitrak'i mba hanao ny anjara fanompoan 'ny fisoronana avo, ary mba ho ny komandy sy ny mpitarika ny vahoakan 'ny Jiosy, sy ny mpisorona, ary mba ho loha laharana eo aminy rehetra.
14:48 Ary izy ireo nanontany izay hapetraka io soratra eo amin'ny takela-barahina, ary hapetraka ao anatin'ny precinct ao amin'ny fitoerana masina ao amin'ny toerana malaza,
14:49 ary ny dika mitovy ireo dia napetraka tao amin'ny fandatsahan-drakitra, ka dia Simona sy ny zanany mba hanana azy io. ' "
1 Makabeo 15
15:1 Ary mpanjaka Antiokosa, ny zanak'i Demetriosa, taratasy avy any amin'ny nosin-dranomasina ho any Simon, ny mpisorona sy ny mpitarika ny firenen'ny Jiosy, ary ny vahoaka rehetra.
15:2 Ary ireo nanohy toy izany: "Mpanjaka Antiokosa ho Simon, ny mpisorona lehibe, ary ny vahoakan 'ny Jiosy: fiarahabana.
15:3 Koa satria olona sasany pestilent no nahazo ny fanjakana ny razantsika, izao no sitrapoko, avy eo, mba hanamarina ny fanjakana sy hamerina azy io, fotsiny toy ny teo aloha. Ary noho izany, Efa nifidy miaramila maro, sady efa nanao sambo ny ady.
15:4 Koa, I mikasa ny hamaky ny faritra, ka mba hamaly faty ho an'ireo izay efa nanao ratsy ny firenentsika sy izay efa rava ny tanàna maro ao amin'ny fanjakako.
15:5 Ankehitriny, noho izany, Manamafy aminareo aho ny fanatitra hohanina rehetra izay rehetra talohako ny mpanjaka efa voavela ho anao, ary na inona na inona fanomezam-pahasoavana hafa izy ireo voavela ho anao.
15:6 Ary mamela anareo aho mba hanao manaitra lehibe eo amin'ny vola madinika ho an'ny firenena.
15:7 Koa, aoka ho masina Jerosalema, ary afaka. Ary ny fiadiana rehetra izay natao, ary ny trano mimanda izay efa naorina, na fa ianareo no mihazona, aoka hitoetra ao aminao.
15:8 Ary izay rehetra nananan'ny amin'ny mpanjaka, ary inona no tokony ho an'ny mpanjaka amin'ny ho avy, hatramin 'izao fotoana sy ho an'ny fotoana rehetra, dia voavela ho anao.
15:9 Na izany aza, rehefa nahazo ny fanjakana, dia hanome voninahitra anao, ary ny firenena, ary ny tempoly tamin'ny voninahitra lehibe, loatra ka ny voninahitrao dia haseho amin'ny tany rehetra. "
15:10 Tamin'ny fito-polo amby zato taona fahefatra nanjakan'i-, Antiokosa nandeha ho any amin'ny tanin'ny razany, ary ny tafika rehetra tonga tao aminy, ka vitsy sisa tamin'i Tryphon.
15:11 Ary Antiokosa mpanjaka nanaraka Azy raha nandositra nanaraka ny amoron-dranomasina ka tonga tany Dora.
15:12 Fa fantany fa ratsy efa tafangona teo aminy, ary ny miaramilany efa nahafoy azy.
15:13 Ary Antiokosa nitondra ny toerana ambony Dora, amin'ny iray hetsy sy roa alina ny lehilahy amin'ny ady sy ny mpitaingin-tsoavaly valo arivo.
15:14 Ary nanodidina ny tanàna, ary ny sambo nanatona an-dranomasina. Dia nanafika ny tanàna an-tanety sy an-dranomasina, ary dia tsy nisy olona navelany hiditra na hivoaka.
15:15 fa Numenius, ary ireo izay efa nomba an'i Jesosy, tonga avy any an-tanànan'i Roma, manana taratasy nosoratana ho an'ny mpanjaka sy ny faritra, izay mirakitra ireo zavatra ireo:
15:16 "Losio, Kaonsily ny Romanina, ny mpanjaka Ptolémée: fiarahabana.
15:17 Ny iraka ny Jiosy, ny namana, tonga tao aminay, mba hanavao ny teo aloha sy ny fifanarahana finamanana, izay iraka avy tany Simon, ny mpitarika ny mpisorona sy ny vahoakan 'ny Jiosy.
15:18 Ary izy ireo koa dia nitondra ny ampinga volamena ny mihoatra ny arivo kilao.
15:19 Ary noho izany, fa nahafaly ny antsika mba manorata any amin'ny mpanjaka sy ny faritra, mba hanao manisy ratsy ho azy ireo, na hiady aminy, ary ny tanànany, ary ny faritra, ary mba tsy hitondra fanampiana ireo miady aminy.
15:20 Ka dia nataoko ho tsara ho antsika mba handray ny ampinga avy aminy.
15:21 Raha, noho izany, ireo izay pestilent no ialofako aminao amin'ny faritra, dia atolory an'i Simona, ny mpitarika ny mpisorona, ka mba hanome ny didim-pitsarana ho azy ireo araka ny lalàna. "
15:22 Izany koa rehetra voasoratra ho mpanjaka Demetriosa, ary ny Atala, ary ny Ariarathes, ary ny Arsasa,
15:23 ary ny rehetra ny faritra, ary ny Lampsacus sy ny Sparsiata, ary ny Delos, ary Myndos, ary Sicyon, ary Caria, ary Samos, ary Pamfylia, ary Lykia, ary Halicarnassus, ary Kosy, ary Side, ary Aradus, ary Rhodes, ary Phaselis, ary Gortyna, ary Gnidus, ary Chypre, sy Kyrena.
15:24 Koa, dia nanoratra ny dika mitovy amin'ireo zavatra ireo Simon, ny mpitarika ny mpisorona sy ny vahoakan 'ny Jiosy.
15:25 Fa Antiokosa mpanjaka napetraka ny toby akaikin'i Dora fanindroany, nampihetsi-po ny tànany hamely azy mandrakariva, ary milina fanaovana ny ady. Ary fonosina Tryphon, fandrao ho afa-mandositra.
15:26 Ary Simona dia naniraka roa arivo lahy voafantina ho azy toy ny mpanampy, ary ny volafotsy, ary ny volamena, ary be dia be ny fitaovana.
15:27 Ary tsy vonona ny handray azy ireo, fa nanapatapaka ny fifanarahana izay nataony tamin'ny azy eo anatrehan'i, dia tafasaraka ny tenany ho afaka aminy.
15:28 Ary izy naniraka azy Athenobius, iray tamin'ireo namany, hiatrehana azy, nanao hoe:: "Tsy mitana Jopa sy Gazara, ary ny fiarovana izay any Jerosalema, izay tanànan'ny fanjakako.
15:29 Efa lao ny faritra, ary ianao dia mamoaka kapoka lehibe any amin'ny tany, ary ianao no ho mpanapaka nandritra toerana maro eto amin'ny fanjakako.
15:30 Ankehitriny, noho izany, tànany eo ambonin'ny tanàna izay mitàna, ary ny hetra ny toerana izay efa ho mpanapaka any an-dafin'ny amin'ny sisin'i Jodia.
15:31 Fa raha tsy, omeo ahy ho azy ireo dimy talenta volafotsy zato, ary ny fandringanana efa nahatonga ny, ary ny hetra ny tanàna, talenta diman-jato hafa. Fa raha tsy, dia ho avy hiady aminao. "
15:32 'S teny, ny sakaizan'ny mpanjaka, dia tonga tany Jerosalema, ary nahita ny voninahitry ny Simon, ary ny voninahiny amin'ny volamena sy ny volafotsy, ary ny be dia be ny fitaovana, ary izy dia gaga. Ary namerina ny tenin'ny mpanjaka taminy.
15:33 Ary Simona namaly azy, ka hoy izy taminy:: "Tsy naka vehivavy hafa firenena tany, ary tsy manao na inona na inona isika mihazona vahiny, fa mihazona ny zara-tanin'ny razanay, izay ho an'ny fotoana sasany tsy ara-drariny nozakain 'ny fahavalontsika.
15:34 Raha ny marina, satria isika dia manana ny fahafahana, dia milaza ny zara-tanin'ny razanay.
15:35 Ary ny hankany Jopa, ka Gazara, izay mitaky, dia nitondra lehibe kapoka ny olona sy ny firenena. Fa ireo, dia hanome talenta zato. "Ary Athenobius tsy namaly teny azy.
15:36 Fa, rehefa niverina tamin'ny fahatezerana ho any amin'ny mpanjaka, dia nilaza taminy ireo teny ireo, ary ny voninahitry ny Simon, ary izay rehetra izay efa hitany. Ary ny mpanjaka tezitra tamin'ny tezitra mafy.
15:37 Fa Trifôna nandositra niondrana an-tsambo ho any Orthosia.
15:38 Ary ny mpanjaka voatendry Cendebeus ho Komandin'ny amoron-tsiraka, ka dia nomeny azy miaramila ny miaramila an-tongotra sy ny mpitaingin-tsoavaly.
15:39 Dia nandidy azy mba hifindra ny toby hamely ny tavan'i Jodia. Dia nandidy azy mba hanorina Kedron, ary ny barricade ny vavahadin'ny tanàna, ary mba hiady ny olona. Fa nanenjika ny mpanjaka Tryphon.
15:40 Ary Cendebeus nandeha namaky an'i Jamnia, ary dia nanomboka nampahatezitra ny mponina, ary ny hanitsaka Jodia, ary handray ny olona ho babo, ary ny hampihatra ny didim-, ary mba hanangana Kedron.
15:41 Ary nametraka miaramila mpitaingin-tsoavaly sy ao, ka dia afaka mivoaka ary handeha amin'ny lalan'i Jodia, araka ilay nolazain'ny mpanjaka voatendriko hanao.
1 Makabeo 16
16:1 Ary noho izany, Jaona niakatra avy tany Gazara, ary dia nilaza tamin'i Simona, ny rainy, ny zavatra nataon'i Cendebeus hanohitra ny vahoakany.
16:2 Ary Simona hoe zanany roa lahy zokiny indrindra, Jodasy sy Jaona, ary hoy izy taminy: "Izaho sy ny rahalahiko, ary ny ankohonan'ny raiko, no niady tamin'ny fahavalon'ny Isiraely hatramin'ny fahazazanay, mandraka androany. Ary izany asa izany no nambinina tamin'ny tanantsika, ka dia namonjy ny Isiraely efa im-betsaka.
16:3 Ary ankehitriny, fa izaho efa antitra, dia tsy maintsy manao zavatra toerana ahy sy ny rahalahiko, ary mankanesa any an hiady ho ny firenentsika. Marina tokoa, Mety ho ny fanampiana ny any an-danitra anie ho aminareo. "
16:4 Avy eo dia nifidy avy amin'ny faritra roa alina ny lehilahy amin'ny ady, sy mpitaingin-tsoavaly; dia nanomboka avy amin'ny Cendebeus. Ary dia nitsahatra ihany izy tao Modìna.
16:5 Dia nifoha maraina ka lasa nivoaka ho any an-tani-hay. Ary indro, be dia be ny miaramila an-tongotra tafika sy mpitaingin-tsoavaly teo mba hitsena azy, ary nisy renirano mikoriana eo aminy.
16:6 Ary izy sy ny vahoakany nifindra ny toby mifanohitra ny tarehiny, ary nahita ny nitebiteby ny olona mba hiampita ny renirano, ary toy izany koa dia nita voalohany. Ary nony nahita azy, ny olona nanaraka azy ihany koa ny niampita.
16:7 Dia nozarazarainy ny olona sy ny mpitaingin-tsoavaly ho ao an-afovoan'ny miaramila an-tongotra. Fa ny mpitaingin-tsoavaly ny fahavalo dia maro izaitsizy tokoa.
16:8 Dia nitsoka ny trompetra masina. Ary Cendebeus sy ny tafiny dia niverina. Ary maro amin'izy ireo ny faty niampatrampatra hatreny. Fa ny sisa dia nandositra ho any amin'ny tanàna mimanda ny fandravana.
16:9 Ary Jodasy, ny rahalahin'i Jaona, naratra. Fa Jaona nanenjika azy ireo, ambara-pahatongany tany Kedron, izay naoriny.
16:10 Ary dia nandositra niala ny lalana ho any amin'ny tilikambo izay tany an-tsaha ny Azota, ary nandoro ireny tamin'ny afo. Ary nahafatesana roa arivo lahy ireo, dia niverina ho any Jodea soa aman-tsara.
16:11 Ary Ptolémée, ny zanak'i Abubus, Voatendry mpitarika ny lemak'i Jeriko, Ary nanao be volafotsy sy volamena.
16:12 Fa izy no zanak'i-in-lalàna ny mpisoronabe.
16:13 Ary ny fony avo, ary tiany mba hahazoana ny faritra, ary nikasa fitaka an'i Simona sy ny zanany, mba handringana azy ireo.
16:14 Ary Simona, nony efa nandeha nitety ny tanàna izay tany amin'ny faritr'i Jodia, ary manao amin'ny miahy azy ireo, dia nidina ho any Jeriko, izy ary Matatiasa sy Jodasy, ny zanany, ao amin'ny fito-polo amby zato taona fahafito-, amin'ny volana fahiraika ambin'ny folo; izany no volana Shevat.
16:15 Ary ny zanak'i Abubus nandray azy ireo, amin'ny fitaky, ho any amin'ny tanàna mimanda kely, izay atao hoe Dok, izay efa naoriny. Ary nanao fanasana lehibe azy, Ary nanafina ny olona teo.
16:16 Ary Simona, nony sy ny zanany lasa mamo, Ptolémée sy ny olony nifoha, ary nitondra ny fitaovam-piadiana, dia niditra tao amin'ny fanangonana. Dia namono azy, sy ny zanany roa lahy, ary ny sasany ny mpanompony.
16:17 Ary izy nanao ny famitahana lehibe teo amin'ny Isiraely, ary dia namaly tsara amin'ny ratsy.
16:18 Ary Ptolémée nanoratra momba ireo zavatra ireo, ary dia naniraka tany amin'ny mpanjaka, ka mba hampanalainy azy miaramila mba hanampy azy, ary afaka hanolotra ho azy ny faritra, ary ny tanànany sy ny fanomezam-boninahitra.
16:19 Ary naniraka olon-kafa ho any Gazara hamono John. Ary nampitondra taratasy ho any amin'ny tribunes ho avy aminy, ary dia homena azy volafotsy, ary ny volamena, ary ny fanomezam-pahasoavana.
16:20 Ary naniraka olon-kafa mba hibodo an'i Jerosalema sy ny tendrombohitra misy ny tempoly.
16:21 Ary nisy iray, mihazakazaka mialoha, nilaza tamin'i John in Gazara, fa ny rainy sy ny rahalahiny maty, ary "dia naniraka hamono anareo koa."
16:22 Fa rehefa nandre izany, dia nirehitra ny raiki-tahotra, Ary nosamboriny ny lehilahy izay tonga handrava azy, ary izy namono azy. Fa fantany fa nitady hahafaty Azy.
16:23 Ary ny sisa amin'ny hafa momba ny Jaona, ary ny ady, ary ny tsara nataony izay nanao tamin'ny herimpo, ary ny fananganana ny rindrina izay natsangany, ary ny zavatra nataony,
16:24 indro, izao no voasoratra ao amin'ny bokin'ny ny andro ny fisoronana, avy ny fotoana izay dia lasa mpisoronabe, araka ny rainy.